Showing posts sorted by relevance for query irrawaddy. Sort by date Show all posts
3/05/2014 10:11:00 PM articles political-news
မြန်မာနိုင်ငံ ဒီမိုကရေစီ ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးဟာ ဘယ်လောက် စစ်မှန်သလဲဆိုတဲ့ Burma's Democracy: How Real? ဆိုတဲ့ ခေါင်းစဉ်နဲ့ မနက်ဖြန် မတ်လ ၆ ရက်နေ့မှာ အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုမှာ အလုပ်ရုံ
အဲဒီ အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲမှာ အဓိက ဦးဆောင် ဆွေးနွေးမယ့်သူတွေကတော့ အမေရိကန် ပြည်ထောင်စု၊ စတန်းဖို့ တက္က သိုလ်ရဲ့ Shorenstein Asia-Pacific Research Center – APRC က ၂၀၁၃ ခုနှစ်အတွက် Shorenstein Journalism Award ဆုရှင် ဧရာဝတီ မဂ္ဂဇင်း တည်ထောင်သူ အယ်ဒီတာချုပ် ကိုအောင်ဇော်၊ Yale Center for the Study of Globalization ယေးလ် ဂလိုဘယ် အွန်လိုင်းမဂ္ဂဇင်း အယ်ဒီတာ Nayan Chanda၊ စတန်းဖို့တက္ကသိုလ် အရှေ့တောင် အာရှရေးရာ ဒါရိုက်တာ Donald K. Emmerson တို့ ဖြစ်ကြပါတယ်။
ဒီအကြောင်း အသေးစိပ်ကို စတန်းဖို့ တက္ကသိုလ် ဝက်ဆိုက်မှာ အခုလို ဖော်ပြထားပါတယ်။
Aung Zaw (panelist) - 2013 Journalism Prize Winner and Founder and Editor, The Irrawaddy News Magazine
Nayan Chanda (panelist) - Director of Publications and the Editor of YaleGlobal Online Magazine at Yale Center for the Study of Globalization
Donald K. Emmerson (panelist) - Senior Fellow at FSI, Emeritus; Affiliated Faculty, CDDRL; Affiliated Scholar, Abbasi Program in Islamic Studies and Director, Southeast Asia Forum at Stanford University
Daniel C. Sneider (moderator) - Associate Director for Research, Shorenstein Asia-Pacific Research Center at Stanford University
The opening up of Myanmar (Burma) and the steps undertaken taken toward political reform in that formerly isolated dictatorship have been among Asia's most dramatic and least expected events. But the establishment of full democracy is still on the agenda and faces many challenges. How willing is the current government in Burma to allowafull and free exercise of political rights, including media freedom? A panel of experts, including Aung Zaw, the editor and founder of The Irrawaddy and this year's recipient of the Shorenstein Award for Journalism in Asia, will address that question in discussing "Burma's Democracy: How Real?"
Stanford University’s Walter H. Shorenstein Asia-Pacific Research Center (Shorenstein APARC) is pleased to announce Aung Zaw as the 2013 recipient of the Shorenstein Journalism Award. Zaw has been selected for his leadership in establishing independent media in Myanmar (Burma) and his dedication to integrity in reporting on Southeast Asia.
Aung Zaw is the founding editor-in-chief and executive director of The Irrawaddy, an independent Burmese media organization operating in Myanmar and northern Thailand. Zaw has been an active campaigner for democratic reform in Burma/Myanmar over the last two decades. He was awarded the 2010 Prince Claus Fund Award for journalism along with two journalists from Iran and Cuba – and is recognized for his active dedication to achieving democratic governance in Burma and his work to uphold press freedom.
Zaw studied Botany at Rangoon University. Asastudent activist in Burma, he was part of the 1988 protests in Rangoon against the Burmese military regime of General Ne Win. He was arrested and detained foraweek in Rangoon’s notorious Insein prison where he was severely tortured during interrogation about his pro-democracy activities. Upon release Aung Zaw continued to work with the resistance movement until the military stagedacoup in September that year and he was forced to leave the country for neighboring Thailand.
Two years later, Aung Zaw founded the Burma Information Group (BIG) in Bangkok, to document human rights violations in Burma. He began to write political commentaries for national newspapers in Thailand and internationally, and in late 1993 launched The Irrawaddy News Magazine in Bangkok, covering Burma affairs. He worked in Bangkok for two years producing The Irrawaddy Magazine until relocating to the more secure position in Chiang Mai in the north of Thailand.
In February 2012, Aung Zaw was able to return to his homeland for the first time in more than 20 years foratemporary visit as an independent journalist. By the end of 2012, The Irrawaddy was able to establishamedia and news office in central Yangon, returning to Burma/Myanmar to practice independent journalism, whilst retainingaregional office in Thailand.
In 2013, the government lifted ban on The Irrawaddyand other exiled websites, the Irrawaddy English magazine and the Irrawaddy Dateline Current Affairs TV programis available for audiences in Myanmar. Aung Zaw writes for New York Times,International Herald Tribune, Time, The Guardian, Bangkok Post, The Nation and several publications in the Europe. His interviews have also appeared on CN, BBC and Al Jazeera. He is the author of the Face of Resistance and isarecent Visiting Scholar at UC Berkeley, School of Journalism.
2/04/2014 07:10:00 PM articles
2/25/2014 06:33:00 PM political-news
ဦးဝီရသူက သူ အပါအဝင် မြန်မာပြည်သူပြည်သားတွေက ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို သမ္မတဖြစ်စေချင်ကြတယ်လို့ တနင်္လာနေ့က ဧရာဝတီကို မိန့်ကြားပါတယ်။
၂၀၁၃ ဇွန်လက ရန်ကုန်မြို့မှာ တွေ့ရတဲ့ ဦးဝီရသူနဲ့ သံဃာများ (ဓာတ်ပုံ - ဂျေပိုင် / The Irrawaddy)
- ဦးဝီရသူနဲ့ NLD ဦးဝင်းတင်တို့ တွေ့ဆုံပွဲအကြောင်း ဆက်သွယ် မေးမြန်း လျှောက်ထားစဉ်မှာ အဲဒီလို မိန့်ကြားလိုက်တာပါ။ ပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းအတွင်း ဦးဝင်းတင် မန္တလေးရောက်စဉ် တွေ့ဆုံကြတာပါ။
ဦးဝင်းတင်နဲ့တွေ့ဆုံစဉ် ဆွေးနွေးတဲ့အကြောင်းအရာတွေထဲ ... အခြေခံဥပဒေ ပုဒ်မ ၅၉ ပြင်ဆင်ရေး၊ မျိုးစောင့်ဥပဒေ ပြဋ္ဌာန်းရေး အစရှိတာတွေ ပါဝင်တယ်လို့ မိန့်ကြားပါတယ်။
သမ္မတ အရည်အချင်းဆိုင်ရာ ပုဒ်မ ၅၉ ကိစ္စ ပြင်ရေးက ဒေါ်စုအတွက် ထောက်ခံတယ်။ ဒီနိုင်ငံမှာ နိုင်ငံခြားသား ဥပမာ တရုတ်၊ ကုလားတို့ သမ္မတဖြစ်လာမှာကို အင်မတန်စိုးရိမ်ပါတယ် လို့ မိန့်ကြားပါတယ်။
မျိုးစောင့်ဥပဒေနဲ့ ပတ်သက်ပြီး .... ဒီနိုင်ငံမှာ မျိုးစောင့်ဥပဒေ အလွန် လိုအပ်နေတယ်။ အမျိုးသမီးတွေက တခြားဘာသာတွေထဲ ဇွတ်အတင်း သွပ်သွင်းခံရမှာကို စိုးရိမ်ပါတယ် တဲ့။
ဒီအကြောင်းအရာနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ဧရာဝတီပင်မစာမျက်နှာ
http://www.irrawaddy.org/burma/meeting-nld-cofounder-wirathu-cautions-suu-kyi-presidency.html မှာ မူရင်းသတင်းကို ဖတ်နိုင်ပါပြီ။
In Meeting With NLD Cofounder, Wirathu Cautions Against Suu Kyi Presidency ဆိုတဲ့ ခေါင်းစဉ်နဲ့ ဖြစ်ပါတယ်။
တွေ့ဆုံမှုနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ဦးဝင်းတင်ကိုလည်း ဆက်သွယ် မေးမြန်းထားပါတယ်။
မန္တလေးရောက်တုန်းမှာ ဆရာတော်က ဖိတ်တယ်၊ ဖိတ်တော့ ကျောင်းကို သွားတယ်၊ ဟိုရောက်တော့ ကျောင်းထဲမှာ ဒေါ်စုဓာတ်ပုံတွေ မိန့်ခွန်းတွေ ကပ်ထားတာ တွေ့ရတယ်။
ကျန်းမာရေးအရ ကျနော်က ထိုင်ခုံနဲ့ထိုင်ရတဲ့အတွက် နားလည်ဖို့ ခွင့်တောင်းတယ်၊ စကားပြောဖြစ်ကြတယ်၊ ဒေါ်စုကို သူ လေးစားတယ် ဆောင်ရွက်ချက်တွေကို ထောက်ခံတယ်၊
၅၉ နဲ့ ပတ်သက်ပြီး ဒေါ်စု သမ္မတဖြစ်လာမှာကို သဘောတူတယ်။ သို့သော်လည်း ဒါပြင်ပြီးရင် တရုတ်၊ ကုလားတွေ သမ္မတဖြစ်လာမှာကို စိုးရိမ်တယ်။
NLD ပါတီထဲမှာ အရည်အချင်း မရှိတာတွေ တွေ့ရတယ်၊ ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးလုပ်သင့်ပြီလို့ အကြံပြု မိန့်ကြားတယ်။
NLD ကို ထောက်ခံလို့ ကျေးဇူးတင်တယ်၊ ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေး ဆိုတာကတော့ လုပ်သင့်တယ်၊ သို့သော်လည်း အဆင့်ဆင့်သော ခေါင်းဆောင်တွေကတော့ ညီလာခံလုပ်ပြီး စနစ်တကျ တင်မြှောက်ထားကြတာဖြစ်တယ် လို့ ပြန်လျှောက်ထားလိုက်ပါတယ်။
မျိုးစောင့်ဥပဒေနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ဘာတွေများ ဆွေးနွေးကြပါသလဲ??? မျိုးစောင့်ဥပဒေကို လူတွေက ဘာကြောင့် မထောက်ခံကြသလဲ မသိဘူး လို့
ဦးဝီရသူက မှတ်ချက် မိန့်ကြားပေမယ့် ကျနော် ဒီကိစ္စကို ဆက် မပြောဘူး၊ ပြောလည်း အငြင်းပွားနေမှာပဲ လို့ ဦးဝင်းတင်က ရှင်းပြပါတယ်။
10/21/2013 08:48:00 AM celebrity-news
ကိုယ်က တရားမ၀င်အလုပ် လုပ်ကိုင်နေတယ် ဆိုရင် ကိုယ်သတိပြုရမယ့်စာရင်းထဲမှာ အဆိုတော် Rihanna ကို ထည့်ထားရပါတော့မယ်။
မကြာသေးခင်က ဒီအဆိုတော်ရဲ့ ထိုင်းခရီးစဉ်အတွင်း ရောက်ခဲ့တဲ့အရက်ဆိုင်တခုမှာ အ၀တ်မဲ့ပြပွဲ ရှိတဲ့အကြောင်း တွစ်တာမှာ လက်ဆော့ ရေးသားလိုက်ပါသတဲ့။
ရလဒ်က ဆိုင်ပိုင်ရှင် အဖမ်းခံရတာပါပဲ။
အဲဒီဆိုင်က ဖူးခက်မြို့မှာပါ လို့ ဆိုတယ်။
ဆိုင်ပိုင်ရှင်ဟာ ခွင့်ပြုချက်မရှိဘဲ ဖျော်ဖြေတင်ပြပွဲပြုလုပ်မှုနဲ့ တရားစွဲခံရဖွယ် ရှိနေပါတယ်။
ဒီအကြောင်း ဧရာဝတီသတင်းစာမျက်နှာ သတင်းတပုဒ် http://www.irrawaddy.org/asia/thai-bar-owner-arrested-following-rihannas-tweets.html မှာ ရေးထားတာပါ။
အ၀တ်မဲ့ကချေသည်တွေရဲ့ပြပွဲအထွေထွေကို စီမံချက်နဲ့ ၀င်ဖမ်းစဉ်မှာ အဲဒီဆိုင်ပိုင်ရှင် အဖမ်းခံထိတာပါ။
အဆိုတော်ရဲ့ ရေးသားချက်ကြောင့် စီမံချက်လုပ်ပြီးဖမ်းကြတာလား၊ နဂိုကတည်းက ဖမ်းဖို့စီမံချက် ရှိပြီးသားလား ???
ခရိုင်အရာရှိ Weera Kerdsirimongkon ရဲ့ အပြောကတော့ ... အဆိုတော်ရဲ့ ရေးသားချက်ကြောင့် ဒီဆိုင်မှာ ဒါတွေ ရှိမှန်း သိရတာလို့ ဆိုပါတယ်။
၀င်ရောက် စစ်ဆေးပေမယ့် တရားမ၀င် ပြသမှု တစုံတရာ မတွေ့ပေမယ့် စနေည တညမှာတော့ လက်ပူးလက်ကြပ် ကွက်ကွက်ကွင်းကွင်း မိတဲ့အတွက် ဖမ်းလိုက်တယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
ခရိုင်အရာရှိရဲ့ အဆိုအရ .... ဆိုင်ရှင်ဟာ ထောင်တလ ကျနိုင်တယ်၊ ဘတ်ခြောက်သောင်း (ဒေါ်လာ နှစ်ထောင်နီးပါး) ဒဏ်ရိုက်ခံရနိုင်တယ် တဲ့။
အဆိုတော်ကြောင့် ဖမ်းရဆီးရမိရတာနောက်တခုကလည်း ထိုင်းမှာပါပဲ။
slow loris လို့ ခေါ်တဲ့ ရှဥ့်လိုလို ဘာလိုလို မျက်လုံးပြူးပြူးကောင်တကောင်နဲ့ တွဲရိုက်ထားတဲ့ပုံကို အဆိုတော်က Instagram အင်တာနက်စာမျက်နှာမှာ တင်လိုက်ပါတယ်။
ဖြစ်ချင်တော့ ... အဲဒီကောင်က ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရမယ့်ရှားပါးတိရိစ္ဆာန်ထဲ ပါဝင်နေတာပါ။
ဒါကြောင့် ဒီအကောင်ရဲ့ ပိုင်ရှင်တွေကို ရဲက လိုက်ရှာပါတယ်။ လူငယ် ၂ ယောက် အဖမ်းခံရပါတယ်။
အခုလောက်ဆို သူတို့ ထောင် ၄ နှစ် နဲ့ ဒဏ်ငွေ လေးသောင်း (ဒေါ်လာထောင့်သုံးရာ) ဒဏ်ရိုက်ခံရမယ့် အမှုကို ရင်ဆိုင်နေရပါပြီ။
အဆိုတော်က စမတ်ဖုန်းလေးနဲ့ ဓာတ်ပုံရိုက်လိုက်၊ အွန်လိုင်းတင်လိုက်တာပါပဲ။
နောက်ဆက်တွဲကတော့ အဖမ်းအဆီးတွေ ဖြစ်ပါတယ်။
ဒီအဆိုတော် မြန်မာပြည်လာဖြစ်ရင် အရက်ဆိုင်တို့ ဘာတို့ သွားမယ် ထင်ပါတယ်။
မြန်မာပြည်က ဆိုင်တွေ၊ ဘာတွေမှာ ဟိုလိုလို ဒီလိုလိုတွေ ရှိရှိ မရှိရှိ ဒီအဆိုတော် Rihanna က ဓာတ်ပုံရိုက် အမှတ်တရ မှတ်တမ်းတင်သွားဖို့များပါတယ်။
ဒါဆိုရင် ဟိုလိုလို ဒီလိုလိုတွေ ရှိမယ့် ဆိုင်ပိုင်ရှင်တွေလည်း အရှုပ်ထဲမှာ ရှင်းအောင်နေလို့မရတော့တဲ့ကိန်းဆိုက်မှာ သေချာပါတယ်။
(ရီဟားနားပုံကို သူ့အွန်လိုင်းစာမျက်နှာပိုစတာတခုကနေ ဖြတ်ယူပါတယ်)
နှစ်ဆယ်နဲ့ဝယ်ထားတဲ့ ထိုင်ခုံဟောင်းထဲက ဒေါ်လာလေးသောင်းတွေ့
5/17/2014 12:02:00 PM strange-news world-news
နယူးယောက်က တက္ကသိုလ်ကျောင်းသားသုံးယောက်က ဝယ်ထားတဲ့ ဆိုဖာထိုင်ခုံအဟောင်းကြီးထဲကနေ
ဒေါ်လာ လေးသောင်း တွေ့လိုက်ရတဲ့ သတင်းက အမေရိကန်မှာ လူဖတ်များတဲ့သတင်းတပုဒ် ဖြစ်နေပါတယ်။
သူတို့က ဒီထိုင်ခုံကို ဒေါ်လာနှစ်ဆယ်နဲ့ ဝယ်ထားတာလို့ ဆိုတယ်။
သူတို့က State University of New York ကျောင်းကပါ။
ဒီပိုက်ဆံတွေ သူတို့ ဘာလုပ်ရမလဲ တိုင်ပင်တော့ ပိုင်ရှင်ကို ပြန်ပေးဖို့ သဘောတူ ဆုံးဖြတ်လိုက်ပါတယ် တဲ့။ ဒီသတင်းက စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့အတွက် ဧရာဝတီဘလော့ http://blog.irrawaddy.org ပရိသတ်ကို ပြန်ဖောက်သည်ချရရင် … ဒီခုံကို လွန်ခဲ့တဲ့ ၂ လက Salvation Army လို့ ခေါ်တဲ့ ချို့တဲ့သူတွေကို ကူညီတဲ့ ခရစ်ယာန်ဘုရားကျောင်းတခုကနေ ဝယ်ခဲ့တာပါ။
ငွေတွေကို တွေ့တာကတော့ နယူးယောက်သား Reese Werkhoven ဆိုတဲ့ ကောင်လေးက တွေ့တာပါ။ (အပေါ်ကပုံက သူ့ပုံပါ။)
ပိုက်ဆံနည်းနည်း တွေ့တော့ သူတို့ ဆက်ပြီး ရှာရာမှာ စာအိတ်နဲ့ထုပ်ထားတဲ့ငွေတွေကို ထပ်တွေ့တယ်လို့ ဆိုတယ်။
စာအိတ်တခုမှာ ရေးထားတဲ့ နာမည်ကို ဖုန်းစာအုပ်မှာရှာပြီး တယ်လီဖုန်းဆက်ရာကနေ မူလပိုင်ရှင်နဲ့ အဆက်အသွယ် ရပါတယ်။
နောက်တနေ့မှာ ပိုင်ရှင်ကို ငွေပြန်အပ်တော့ သူတို့ကို ဒေါ်လာ တထောင် ဆုပြန်ချတယ်လို့ သတင်းတွေမှာ ရေးပါတယ်။
ဒီပိုက်ဆံတွေက ဘယ်လို ဘယ်လို ခုံထဲရောက်ပြီး ကျောင်းသားတွေဆီ ရောက်သွားတာလဲ?
ဒီအမျိုးသမီးက သူ့ခင်ပွန်းသည် မသိအောင် ပိုက်ဆံကို စာအိတ်ထဲထည့်ပြီး ဆိုဖာထိုင်ခုံထဲ ဖွက်ခဲ့တယ်၊
ခင်ပွန်းသည်ကွယ်လွန်ပြီးနောက်မှာလည်း ပိုက်ဆံကို ဒီနည်းနဲ့ သိမ်းခဲ့ပါတယ် တဲ့။
နောက်ပိုင်း သူ ဆေးရုံတက်ချိန်မှာ သမီးနဲ့ သားမက်က ဒီခုံဟောင်းကြီးကို Salvation Army သွားလှူတယ်လို့ ဆိုတယ်။
ခုတော့ ပိုက်ဆံတွေက မူလပိုင်ရှင်လက်ထဲ ပြန်ရောက်ပါပြီ။
ပိုက်ဆံတွေ ပေးလိုက်တော့ သူ့ယောက်ျား ဒီအခန်းထဲပြန်ရောက်လာသလို ခံစားမိတယ်လို့ အမျိုးသမီးကြီးက ပြောဆိုကြောင်း Reese Werkhoven ရှင်းပြတယ်လို့ သတင်းတပုဒ်မှာ ရေးထားပါတယ်။
ကဲ… ဝယ်ထားတဲ့ ဆိုဖာအဟောင်းတွေ ရှိရင် နည်းနည်းတော့ စူးစမ်းသင့်ပြီ မဟုတ်လား။
အိမ်ဖောက်ခိုးဝှက်မှုတွေ မကြာခဏ ရှိတတ်တဲ့ နယူးယောက်မှာလည်း ဒီလို ပိုက်ဆံသိမ်းနည်းကို တချို့ လုပ်တတ်ပါတယ်။
ဒီလို သိမ်းမယ် ဆိုရင်လည်း အိမ်ကလူတွေကို အသိပေးထားတာ မမှားဘူးလို့ ဒီသတင်းက ပြောပြနေပါတယ်။
2/26/2014 08:56:00 AM health-news
ရောဂါရှိသူအမျိုးသားအိပ်ဖော်နဲ့ အတူနေတဲ့အခါ ကွန်ဒုံး သုံးရင်လည်း စိတ်မချရဘူး၊ ရောဂါကူးနိုင်ခြေရှိတယ် လို့ ရန်ကုန်အခြေစိုက် NOW အပတ်စဉ်ထုတ် ဂျာနယ် ဆောင်းပါးတပုဒ်မှာ ဒီတပတ် သတိပေး ရေးသားထားပါတယ်။
"ကွန်ဒုံးသုံးပေမယ့် သင့်ရဲ့ အမျိုးသမီးအင်္ဂါဟာ ရောဂါရှိတဲ့ အမျိုးသားရဲ့ ကပ္ပာယ်အိတ်အရေပြားနဲ့ ပွတ်တိုက်ထိတွေ့ဖန် များတဲ့အခါ ကွန်ဒုံးသုံးလည်း ရောဂါကူးနိုင်တာကို သတိမူသင့်ပါတယ်" လို့ ရေးထားပါတယ်။
အမျိုးသမီးတွေနဲ့ လိင်မှုရေးရာ ဆိုတဲ့ မျက်နှာဖုံးဆောင်းပါးမှာ အဲဒီလို သတိပေးထားတာပါ။
ကွန်ဒုံးအသုံးပြုခြင်းက ကျန်းမာရေး လူမှုရေးဆိုင်ရာ ကောင်းကျိုးတွေ အများအပြား ရှိပေမယ့် အသုံးပြုသင့်သူတချို့က သုံးရမှာ ဝန်လေးနေကြပါသေးတယ်။
ကွန်ဒုံးကုမ္ပဏီတွေကလည်း အသုံးပြုသူများကိုဆွဲဆောင်တဲ့အနေနဲ့ သူတို့ရဲ့ ထုတ်ကုန်တွေကို ပါးသည်ထက် ပါးအောင် ထုတ်နေကြတာပါ။
ပြီးခဲ့တဲ့ ကြာသပတေးနေ့မှာ ထွက်ပေါ်လာတဲ့ ဂင်းနစ် ကမ္ဘာ့စံချိန်အဖွဲ့ရဲ့ ထုတ်ပြန်ချက်အရ တရုတ်ကုမ္ပဏီတခုက ကမ္ဘာ့ အပါးလွှာဆုံးကွန်ဒွန် ထုတ်လုပ်ထားတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
သူ့မတိုင်ခင် စံချိန်တင်ခဲ့တာကတော့ ဂျပန်ကုမ္ပဏီတခုပါ။ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကျန်းမာရေးနဲ့ တနည်းတဖုံ ဆက်စပ်ပတ်သက်ပြီး သတိပေး၊ သတင်းပေး၊ ပညာပေးတာမျိုးက စာနယ်ဇင်းတွေမှာ တခါတရံ တွေ့ရမှာပါ။ ဒီဘလော့မှာလည်း ကွန်ဒွန် မဖြစ်မနေ သုံးရမယ့် အနေအထားကြောင့် အပြာကားရိုက်သူများ LA မှ ထွက်ရန် စဉ်းစား ဆိုပြီး မနှစ်က http://blog.irrawaddy.org/2012/01/la.html မှာ ဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။ အဲဒီလို ဥပဒေထုတ်လိုက်ခါမှပဲ ၁၈ နှစ်အထက် ကြည့်ရတဲ့ဗီဒီယိုကားရိုက်သူတွေ အဲဒီဒေသကို စွန့်ကြပါတယ် လို့ အမေရိကန် အွန်လိုင်းစာမျက်နှာ ဆောင်းပါးတပုဒ်မှာ ရေးထားပါတယ်။
နိုင်ငံခြားသတင်းထောက်များ ဗီဇာသက်တမ်း အများဆုံးတစ်လထိသာ ပေးတော့မည်
2/14/2014 10:01:00 AM Myanmar-news
ဟိန်းကိုစိုး|ဖေဖော်ဝါရီ ၁၄ ရက်၊ သောကြာနေ့၊ ၂၀၁၄ ခုနှစ်။
မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းသို့ ၀င်ရောက်မည့် နိုင်ငံခြားသတင်းထောက်များ ပြည်ဝင်ခွင့် ဗီဇာသက်တမ်းကို အများဆုံးတစ်လထိသာ ခွင့်ပြုတော့မည်ဟု ပြန်ကြားရေးဝန်ကြီးဌာန ဒုတိယ၀န်ကြီးဦးရဲထွဋ်က မဇ္ဈိမကို အတည်ပြုပြောသည်။
ထို့ပြင် နိုင်ငံတွင်းပြုလုပ်သည့် အစည်းအဝေးများ၊ ပွဲများကို ၀င်ရောက်သတင်းယူလိုသူများသည် ယင်းအစည်းအဝေးမကျင်းပမီ နှစ်ရက်၊ အစည်းအဝေးကျင်းပနေချိန်နှင့် အစည်းအဝေးပြီး နောက်နှစ်ရက်တို့ကိုသာ ခွင့်ပြုသွားမည်ဟု ဆိုသည်။ နိုင်ငံခြားသတင်းထောက်များ မြန်မာနိုင်ငံအတွင်း နေထိုင်ရန် ဗီဇာသက်တမ်းကို ယခင်က ခြောက်လအထိ ခွင့်ပြုပေးထားခဲ့သည်။
“အဓိကကတော့ ဆီးဂိမ်းရယ်၊ ကမ္ဘာ့စီးပွားရေးဖိုရမ်ရယ် လုပ်တဲ့အချိန်မှာ သတင်းထောက်တွေဝင်ဖို့ လွယ်ကူအောင် လုပ်ပေးခဲ့တယ်။ အဲဒီလိုဝင်လာတဲ့သူတွေက အခု ပြည်တွင်းမှာ ရုံးတွေဖွင့်ပြီးတော့ ပြည်တွင်းမှာပဲ သက်တမ်းတိုးပြီး နေနေတာတွေ၊ ဒီလိုမျိုးတွေကျတော့ တကယ်ရုံးဖွင့်ခွင့်ရသူတွေနဲ့ သူ တို့က အခွင့်အရေးတူသလိုဖြစ်နေတယ်။ ဒါကြောင့် ဗီဇာသက်တမ်းတွေကို ပြန်စိစစ်လိုက်တာ”ဟု ဦးရဲ ထွဋ်က ပြောသည်။
ပြည်တွင်း၌ ရုံးခန်းဖွင့်မည့် နိုင်ငံခြားသတင်းမီဒီယာများသည် နိုင်ငံခြားသတင်းထောက်များအသင်းနှင့် ဆက်သွယ်ဆောင်ရွက်ရန် လိုအပ်မည်ဖြစ်ပြီး ဆီးဂိမ်းနှင့် ကမ္ဘာ့စီးပွားရေးဖိုရမ်များ ပြုလုပ်ချိန်အတွင်း ၀င် ရောက်လာကြသည့် နိုင်ငံခြားသတင်းထောက်များသည် ဆက်သွယ်ဆောင်ရွက်ခြင်းမရှိဘဲ ပြည်တွင်း တွင် ရုံးသဖွယ် ဖွင့်လှစ်နေထိုင်နေခြင်းတို့ကြောင့် ယခုကဲ့သို့ ဗီဇာသက်တမ်းလျှော့ချလိုက်ခြင်း ဖြစ်သည် ဟု ဆိုသည်။
ရခိုင်ပြည်နယ်၊ မောင်တောမြို့နယ်၊ ဒုချရားတန်းကျေးရွာအတွင်း အကြမ်းဖက်မှုတွင် ဘင်္ဂါလီအယောက် ၄၀ သေဆုံးသည်ဆိုသော သတင်းများ Irrawaddy၊ AP တို့တွင်ဖော်ပြခဲ့သည်ကို အစိုးရဘက်မှ သတင်း မှားများဖော်ပြသည်ဟု ပြောဆိုပြီးနောက်ပိုင်း ယခုကဲ့သို့ နိုင်ငံခြားသတင်းထောက်များအား ဗီဇာသက် တမ်းလျှော့ချခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်ဟုလည်း ပြည်တွင်းမီဒီယာအသိုင်းအ၀န်းများဘက်မှ သုံးသပ်ပြောဆိုကြ သည်။
အဆိုပါကိစ္စနှင့်ပတ်သက်၍ မြန်မာနိုင်ငံ စာနယ်ဇင်းကောင်စီ အတွင်းရေးမှူး ဦးကျော်မင်းဆွေက “တ ကယ်သာ အဲလိုလျှော့ခဲ့တယ်ဆိုရင် ကောင်းတဲ့အခြေအနေမဟုတ်ဘူး။ ဒီမိုကရေစီပြောင်းတာ ပိုတိုး တက်လာရမှာ။ ကျန်တာတိုးတက်ပြီး ဒါလျော့တာ မကောင်းဘူး”ဟု မဇ္ဈိမကို ပြောသည်။
Irrawaddy ၏ “နိုင်ငံခြားသတင်းသမား ပြည်ဝင်ခွင့်ဗီဇာ ဦးသိန်းစိန်အစိုးရ ပြန်ကန့်သတ်ပြီ” ဆိုသည့် သတင်းထဲတွင် ယခုလို ဗီဇာကန့်သတ်မှုများကြောင့် ရန်ကုန်အခြေစိုက် နိုင်ငံတကာသတင်းဌာနများမှ နိုင်ငံခြားသတင်းထောက်တချို့ မြန်မာနိုင်ငံမှ ပြန်လည်ထွက်ခွာနေရသည်ဟု ဖော်ပြထားသည်။
2/13/2014 12:26:00 AM political-news
သတင်း လွတ်လပ်ခွင့်အတွက် ရန်ကုန်မြို့တွင် ဇန်န၀ါရီလ ၇ ရက်နေ့က လမ်းလျှောက် ဆန္ဒပြကြသော သတင်းမီဒီယာ သမားများ (ဓာတ်ပုံ – စိုင်းဇော် / ဧရာဝတီ)
သမ္မတ ဦးသိန်းစိန် အစိုးရက စစ်အစိုးရခေတ် တလျှောက်လုံး ကျင့်သုံးခဲ့တဲ့ စာပေ စိစစ်ဖြစ်တောက်တဲ့ ဆင်ဆာစနစ် ကို ဖျက်သိမ်းပြီး မီဒီယာလွတ်လပ်ခွင့်တချို့ ခွင့်ပြုခဲ့ပေမယ့် ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေး အရှိန် နည်းပါး လာချိန်မှာတော့ သတင်း ရေးသား ဖော်ပြမှုနဲ့ ပတ်သက်လို့ မီဒီယာတွေကို တရားစွဲဆိုမှု၊ နိုင်ငံခြား သတင်း ထောက်တွေကို ပြည်ဝင်ခွင့်ဗီဇာ ကန့်သတ် ပိတ်ပင်မှု၊ သတင်းမီဒီယာတွေကို အစိုးရက ထိန်းချုပ်နိုင်တဲ့ မီဒီယာ ဥပဒေတွေကို ပြဋ္ဌာန်းဖို့ လုပ်ဆောင် နေမှု၊ နိုင်ငံပိုင် သတင်းစာတွေမှာ ထည့်သွင်းတဲ့ ပုဂ္ဂလိ သတင်း မီဒီယာတွေရဲ့ ကြော်ငြာတွေကို စိစစ်ဖြတ်တောက်မှု တွေ ပြုလုပ်ပြီး မီဒီယာတွေကို လွတ်လပ်ခွင့်ကို တင်းကျပ် လာပါတယ်။
သမ္မတ ဦးသိန်းစိန်က စတုတ္ထမဏ္ဍိုင်မီဒီယာတွေကို လွတ်လပ်ခွင့်ပြုနေတယ်လို့ မိန့်ခွန်းတွေမှာ တဖွဖွ ပြောခဲ့ပေမယ့် တကယ်တန်း ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုတွေမှာ ခရီးမတွင်တော့ဘူး ဆိုတာမျိုး မီဒီယာတွေက ထောက်ပြ ဝေဖန်ရေးသားမှုတွေကို အရေးတယူ ဂရုတစိုက် မလုပ်တော့ပါဘူး။ ဒါပေမယ့် နိုင်ငံတကာ အလယ်မှာ
အစိုးရကို ထိခိုက်စေလာနိုင်တဲ့ ထိရှလွယ် ရေးသားမှု တွေအပေါ်တော့ ချက်ချင်း အရေးယူတဲ့အပြင် ဥပဒေအရ ပြင်းပြင်းထန်ထန် အရေးယူတာတွေ လုပ်လာပါတယ်။
မကွေးတိုင်း ဒေသကြီး ပေါက်မြို့နယ်တွင် ရှိသော တပ်မတော်ရဲ့ လက်နက်စက်ရုံတခု အကြောင်း ပြည်တွင်း အပတ်စဉ် ထုတ် Unity ဂျာနယ်က ထုတ်ဖော် ရေးသားခဲ့ရာမှာတော့ အာဏာပိုင်တွေက နိုင်ငံတော် လျှို့ဝှက်ချက် ပေါက်ကြားမှုနဲ့ အရေးယူလာပါတယ်။ လျှို့ဝှက်ဓာတု လက်နက်စက်ရုံဆိုတဲ့ မှားယွင်းတဲ့ အသုံးအနှုန်းကြောင့် အရေးယူတာလို့ အစိုးရဘက်က တရားဝင်ထုတ်ဖော်ပြောဆိုလာပေမယ့် Unity ဂျာနယ်က သတင်းထောက်တွေ၊ တာဝန်ခံတွေကို ရုတ်တရက် ချက်ချင်း ဖမ်းဆီးအရေးယူ အမှုဖွင့်တာမျိုး
တွေလုပ်ဆောင်ခြင်းဖြင့် သူတို့အနေနဲ့ မီဒီယာကို သည်းခံ ခွင့်လွှတ် မှာ မဟုတ်ဘူးဆိုတဲ့ တင်းမာတဲ့ သဘောထားကို ထင်သာ မြင်သာရှိစေခဲ့ပါတယ်။
Unity ဂျာနယ်မှာပါရှိတဲ့ “ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးဟောင်း၊ လက်ရှိ ကာချုပ်နှင့် တရုတ်ပညာရှင်တို့၏ ပေါက်မြို့နယ်ရှိ လျှို့ဝှက် ဓာတုလက်နက်စက်ရုံ´´ သတင်းဆောင်းပါးကြောင့် Unity ဂျာနယ်ရဲ့ အမှုဆောင် အရာရှိချုပ် ဦးတင့်ဆန်း၊ သတင်း ထောက် ကိုရာဇာဦး၊ ကိုပိုင်သက်ကျော်နှင့် ကိုလူမော်နိုင်တို့ အပြင် ကိုလူမော်နိုင်၏ ဇနီးမလွင်လွင်မြင့်၊ ဂျာနယ် ရုံးအဖွဲ့မှူး ကိုအောင်ဝင်းထွန်းတို့ကို နိုင်ငံတော်လျှို့ဝှက်ချက်ပေါက်ကြားမှုနဲ့ တရားရုံးတင် စစ်ဆေး အရေးယူထားပါတယ်။
အမေရိကန်နိုင်ငံအခြေစိုက် ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ လူ့အခွင့်အရေးစောင့်ကြည့်ရေး HRW က မြန်မာအစိုးရအနေနဲ့ စာနယ်ဇင်း တွေရဲ့ ဝေဖန်ထောက်ပြမှု ကို လက်ခံဖို့နဲ့ စာနယ်ဇင်းသမားတွေ ရာဇ၀တ်မှုဆိုင်ရာ ပုဒ်မတွေနဲ့ အရေးယူ အပြစ်ပေး တာတွေ မလုပ်ဖို့၊ စာနယ်ဇင်းတွေကို သည်းခံဖို့ ဖေဖော်ဝါရီလ ၅ ရက်နေ့ သမ္မတ ဦးသိန်းစိန် နဲ့ HRW ၏ အမှုဆောင် ဒါရိုက်တာ Kenneth Rothတို့ နေပြည်တော်မှာ တွေ့ဆုံစဉ် HRW တောင်းဆိုခဲ့ပါတယ်။
ဒီမိုကရေစီ ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေး လုပ်နေပါတယ်ဆိုတဲ့ သမ္မတဦးသိန်းစိန်အစိုးရအနေနဲ့ စာနယ်ဇင်း လွတ်လပ်ခွင့်၊ သတင်း လွတ်လပ်ခွင့် အပြည့်အ၀ မပေးသေးတဲ့အပြင် စာနယ်ဇင်းတွေအပေါ်မှာ သည်းခံခွင့်လွှတ်မယ့် သဘောထားမျိုး မရှိတာကြောင့် HRW ရဲ့တောင်းဆိုမှုက အရာမထင်နိုင်ပါဘူး။
သမ္မတ ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူ ပြန်ကြားရေး ၀န်ကြီးဌာန ဒုဝန်ကြီး ဦးရဲထွဋ်က Unity ဂျာနယ်ကိစ္စက သတင်းလွတ်လပ်ခွင့်နဲ့ မသက်ဆိုင်ဘဲ အမျိုးသားလုံခြုံရေးအတွက် အရေးယူတာလို့ ပြောဆိုလိုက်ခြင်းဖြင့် မီဒီယာတွေရဲ့ရေးသားမှုတွေကို သည်းခံမှာ မဟုတ်တော့ဘူး ဆိုတဲ့ တင်းမာတဲ့ သဘောထားတွေ ထုတ်ဖော် ပြသလာပါတယ်။
“ ပြီးခဲ့တဲ့ နှစ်တွေမှာ သမ္မတအပါအ၀င် တာဝန်ရှိသူများကိုရေးသားချက်များဟာ အသရေဖျက်မှုနဲ့ငြိစွန်း နိုင်တဲ့
အရေးအသားတွေဖြစ်နေတာတောင် အစိုးရ က ဘာမှ မလုပ်ခဲ့ပါဘူး။ စာနယ်ဇင်းအချင်းချင်း တရားစွဲတာက အစိုးရဌာနများ၊ ပုဂ္ဂလိကများကတရားစွဲတာထက်ပိုများတယ်ဆိုတာ ခင်ဗျားတို့ လေ့လာကြည့်ရင် တွေ့နိုင်ပါတယ်။နောက်ပြီး ဘယ်သူမဆို တရား ဥပဒေရဲ့ အကာအကွယ်ကို ယူခွင့်ရှိတဲ့အတွက်စာနယ်ဇင်း အချင်းချင်းကဖြစ်စေ၊ ပုဂ္ဂလိက ဖြစ်စေ အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုကဖြစ်စေ သူ့ဂုဏ်သိက္ခာကို ထိပါးလာတယ်ထင်ရင် တရားစွဲခွင့်ရှိတယ်လို့ ကျနော် ယုံကြည်တယ်။ စာနယ်ဇင်းသမား ဘာလုပ်လုပ် တရားမစွဲရဘူးဆိုတဲ့ နိုင်ငံ ကမ္ဘာပေါ်မှာမရှိဘူး”လို့ ဦးရဲထွဋ်က ဆိုပါတယ်။
ဦးရဲထွဋ်ရဲ့ စကားတွေက မီဒီယာတွေကို ကျနော်တို့ အစိုးရက ဆက်ပြီး သည်းခံမှာမဟုတ်သလို အစိုးရကို ထိခိုက်တယ်လို့ ယူဆရင်လည်း တရားစွဲအပြစ်ပေးဖို့ ၀န်မလေးဘူးဆိုတဲ့ အကဲဆတ်တဲ့ အစိုးရမူဝါဒကို ဖွင့်ဟလိုက်တာဆိုရင်လည်း မမှား နိုင်ပါဘူး။
Unity ဂျာနယ် သတင်းထောက်တွေ ဖမ်းဆီးခံရမှု အတွက် နိုင်ငံတကာ သတင်းမီဒီယာ အဖွဲ့အစည်းတွေ ဖြစ်တဲ့ နယ်စည်း မခြား သတင်းထောက်များအဖွဲ့( RSF) ၊ နိုင်ငံတကာဂျာနယ်လစ်များ ကာကွယ် စောင့်ရှောက်ရေး အဖွဲ့( CPJ ) တို့က သတင်းစာ လွတ်လပ်ခွင့် အပေါ် စိုးရိမ်မိသလို သတင်းထောက်တွေ အဖမ်းခံရမှုအပေါ်လည်း ကန့်ကွက်ကြောင်း ထုတ်ပြန်ကြေညာခဲ့ပါတယ်။
ပြည်တွင်း အခြေစိုက် မြန်မာနိုင်ငံ စာနယ်ဇင်းကောင်စီ(ယာယီ) အပါအ၀င် မြန်မာနိုင်ငံ သတင်းစာဆရာ အသင်း(MJA) ၊ မြန်မာသတင်းသမဂ္ဂ(MJU) ၊ မြန်မာဂျာနယ်လစ်ကွန်ရက် (MJN) တို့ကလည်း Unity ဂျာနယ်ကိစ္စ ကြားဝင်ဆောင်ရွက် ပေးဖို့ အစိုးရကို ကမ်းလှမ်းကြောင်းကြေညာချက်ထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။ ဒါပေမယ့်လည်း အစိုးရက နိုင်ငံတကာနဲ့ ပြည်တွင်းအဖွဲ့အစည်းတွေရဲ့ တောင်းဆိုချက်အပေါ် ဥပဒေအတိုင်း ဆောင်ရွက် မှာပါ ဆိုတဲ့ ထုတ်ပြန်ချက်တခုတည်းနဲ့ ပယ်ချခဲ့ပါတယ်။
သတင်းစာဆရာကြီးဦးဝင်းတင်ကတော့ Unity ဂျာနယ် အပေါ် အစိုးရရဲ့ အရေးယူမှုကိုသံသယရှိတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
“လွတ်လပ်စွာ ထုတ်ဖော် ရေးသားခွင့်ကတော့ ရှိရမယ်။ ဒါပေမယ့် လုံခြုံရေးနဲ့ ဆိုင်တဲ့ ကိစ္စတွေကိုတော့ ရေးသား တဲ့အခါမှာ ဒါက နိုင်ငံတကာမှာလည်းရှိတာပဲ။ သူ့ရေးလို့ရနိုင်တဲ့ အတိုင်းအတာဆိုတာ ရှိတယ်။ ဝေဖန်ပိုင်းခြားနိုင်မှု ကတော့ ရှိရမယ်။ ဒီကိစ္စက လူသိရှင်ကြား လုပ်နေတာ။ လူမြင်ကွင်းမှာ လုပ်နေတာကို နိုင်ငံတော် လျှို့ဝှက်ချက် ပေါက်ကြားမှုဆိုတာကတော့ မဖြစ်သင့်ဘူး။ ဓာတုဗေဒ လက်နက်စက်ရုံ မဟုတ်ဘူး။ မှားတယ်ဆိုရင်ဘာမှားလဲ ရှင်းလေ” ဟု ဦးဝင်းတင်က ပြောသည်။
အစိုးရပိုင်းက ဥပဒေကြောင်းအရ သတင်းစာဆရာတွေ အပေါ်မှာ အရေးယူမှု ရှိနေတဲ့အပြင် တခြားတဖက်မှာ လည်း အစိုးရ သတင်းစာမှာ ကြော်ငြာထည့်တဲ့ပုဂ္ဂလိကမီဒီယာတွေရဲ့ စာနယ်ဇင်း ကြော်ငြာတွေကိုလည်း စိစစ်ဖြတ်တောက်မှုတွေလုပ်နေပြီး တချို့ကြော်ငြာဆိုရင် လုံးဝ ပေးမထည့်တဲ့အထိဖြုတ်ပစ်တာမျိုးတွေ လုပ်လာပါတယ်။
လစဉ်ထုတ် လူ့အခွင့်အရေးနှင့် ဒီမိုကရေစီ ပညာရပ်ဆိုင်ရာ နိုင်ငံရေး ဂျာနယ်ရဲ့ ဇန်န၀ါရီလထုတ် ဂျာနယ်အတွက် အစိုးရ သတင်းစာ တွေမှာကြော်ငြာထည့်သွင်းခဲ့ရာမှာ အကျင့်ပျက် ခြစားမှု၊ လာဘ်ပေးလာဘ်ယူမှု ဆိုတဲ့စာသား ခေါင်းစဉ် တွေကို အစိုးရသတင်းစာက ဖြတ်တောက်ပြီး ကြော်ငြာ ထည့်သွင်းပေးခဲ့ပါတယ်။
အလားတူ The Irrawaddy ဂျာနယ် အတွဲ ၁ ၊ အမှတ် ၁ ဂျာနယ်ကို ကြေးမုံသတင်းစာ မှာ ကြော်ငြာ ထည့်သွင်းခဲ့ရာမှာ “ဦးတေဇ၏ ပူတာအိုစီမံကိန်း ဝေဖန်ခံရ” ဆိုတဲ့ စာသားခေါင်းစဉ်မှာ ဦးတေဇ နာမည်ကို ဖြုတ်ပေးဖို့ တောင်းဆိုခဲ့သလို နောက်ပိုင်းမှာ The Irrawaddy ဂျာနယ်ရဲ့ ကြော်ငြာကို နေပြည်တော်က တိုက်ရိုက်စိစစ်မယ်ဆိုပြီး ကြော်ငြာ ထည့်မပေးတဲ့ အထိ ဖြစ်လာပါတယ်။
အစိုးရသတင်းစာ ကြေငြာ မူဝါဒတွေ အရ အငြင်းပွားဖွယ်ရာ၊ ပဋိပက္ခ ဖြစ်ဖွယ်ရာ ရှိတဲ့ အသုံးအနှုန်းတွေလို့ ထင်မြင် ယူဆရင် ဖြုတ်ပစ်ပိုင်ခွင့်ရှိတယ်လို့ကြေးမုံသတင်းစာ ကြော်ငြာ တာဝန်ခံ ဦးသက်ပိုင်ထူးက ပြောဆိုတယ်။
“တချို့ကိစ္စတွေက ကျင့်ဝတ်နဲ့ မညီလို့ Edit လုပ်ရတာ။ ခုနောက်ပိုင်းတော့ ကြော်ငြာလာထည့်တဲ့သူကို ဒါလေးတွေကို ဖြုတ်ပေးဖို့ ပြောမယ်။ ဂျာနယ်တွေ၊မဂ္ဂဇင်းတွေထဲမှာတော့ သူတို့မူအတိုင်း ကြိုက်သလို ရေးလို့ရတယ်လေ။ဒီမှာတော့ မရဘူး။ ထည့်ပေးလိုက်လို့ ပြဿနာလေးတွေလည်း ကြုံဖူးလို့ ဒီလိုမူတွေကို ချထားရတာ”လို့ ဦးသက်ပိုင်ထူးက ဆိုပါတယ်။
ဒါ့အပြင် အစိုးရအနေနဲ့ နိုင်ငံခြားသတင်းထောက်တွေအပေါ်မှာ ဗီဇာ ကန့်သတ်တင်းကျပ် မှုတွေ လုပ်လာပြီး ဒီလို လုပ်ဆောင်မှုက ပြည်တွင်းမှာ တရားဝင်သတင်းအေဂျင်စီ ရုံးခန်း မဖွင့်လှစ်ဘဲ လာရောက်လုပ်ကိုင်တဲ့ နိုင်ငံခြားသတင်း ထောက်တွေကို ရည်ရွယ်လုပ်ဆောင်တယ်လို့ ဦးရဲထွဋ်ကဆိုပါတယ်။
“ဗီဇာထောက်ခံပေးတဲ့ မူဝါဒ ပြောင်းလဲရတာက ရုံးခန်းမဖွင့်ဘဲနဲ့အကြိမ်ကြိမ်သက်တန်းတိုးနေတဲ့ အတွက် ရုံးဖွင့်ပြီး ဆောင်ရွက်နေသူတွေနဲ့ အတူတူဖြစ်နေတာကြောင့် ပြန်လည်ပြင်ဆင်သတ်မှတ်တာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့်တရားဝင် သတင်းအေဂျင်စီ ဖွင့်လှစ်ထားရင် အဲဒီရုံးမှာ တာဝန်ပေးမယ့်သတင်းထောက်နဲ့ မိသားစု အတွက် ခြောက်လ အကြိမ်ကြိမ် ပြည်ဝင်ခွင့်ဗီဇာပေးပါ့မယ်။ အခါအားလျော်စွာ သတင်း လာယူတာဆိုရင် တလ တကြိမ် ပြည်ဝင်ခွင့်ဗီဇာထောက်ခံ ပေးပါ့မယ်။ အခမ်းအနား၊ အစည်းအဝေး လာတက်မယ်ဆိုရင် အခမ်းအနားအကြို ၂ ရက်၊ အပြီး ၂ ရက်နဲ့ အခမ်းအနား ကာလ ပေးပါ့မယ်” လို့ သူကဆိုပါတယ်။
မြန်မာပြည်မှာ အေဂျင်စီ ရုံးခွဲမရှိတဲ့ သတင်းစာဆရာတိုင်းကို လွတ်လပ်စွာ ၀င်ခွင့်မပြု ဆိုတဲ့ မူဝါဒ ပေါ်လစီက သမ္မတဦးသိန်းစိန် အမြဲပြောဆိုနေတဲ့ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုနဲ့ ဖီလာဆန့်ကျင်နေပြီး အာဆီယံဥက္ကဋ္ဌ ရာထူး
မြန်မာနိုင်င်ငံဆီလာတဲ့ နိုင်ငံတကာ သတင်းထောက်တွေအပေါ် ထားတဲ့ အစိုးရရဲ့ စည်းမျဉ်းခံ မီဒီယာလွတ်လပ်ခွင့်စနစ် ကို ရောင်ပြန်ဟပ်နေပါတယ်။
တချိန်တည်းမှာပဲ အစိုးရအနေနဲ့ သတင်းစာ၊ ဂျာနယ် ထုတ်ဝေခွင့်၊ သတင်းမီဒီယာလုပ်ငန်း လုပ်ကိုင်ခွင့် အပါအ၀င် ရုပ်သံ၊ ပုံနှိပ်၊အွန်လိုင်း သတင်းမီဒီယာမှန်သမျှ အစိုးရရဲ့ ခွင့်ပြုချက်၊ အစိုးရထံ ခွင့်ပြုချက် တောင်းခံပြီးမှ လုပ်ကိုင်ခွင့်ရှိတယ် ဆိုတဲ့ပြဋ္ဌာန်းချက်တွေပါတဲ့ ပုံနှိပ်ခြင်းနှင့် ထုတ်ဝေခြင်းဥပဒေကြမ်းကို ဆက်လက် အတည်ပြုဖို့ ကြိုးစားနေပါတယ်။
ပြန်ကြားရေးဝန်ကြီးဌာနက စိတ်ကြိုက် ရေးဆွဲထားတဲ့ မီဒီယာ ဥပဒေကြမ်းတွေကို စာနယ်ဇင်းသမားတွေက ဘယ်လောက်ပဲ ကန့်ကွက်မှုတွေရှိနေပါစေ ဆက်လက် ပြဋ္ဌာန်းဖို့အလျှော့မပေးဘဲ ကြိုးစားနေခြင်းက သတင်း လွတ်လပ်ခွင့် အပေါ်ဆက်လက်ထိန်းချုပ်ချင်တဲ့ ရည်ရွယ်ချက်ဖြစ်ပါတယ်။
2/09/2014 10:58:00 AM articles
လက်ရှိမြန်မာနိုင်ငံမှာ လူငယ်တွေရဲ့အကြား Sex Education နဲ့ပတ်သက်ပြီး ဗဟုသုတ ပျံ့ပွားမှု ဘယ်လောက် ရှိနေသလဲ၊ ဒီအပေါ်မှာ လူငယ်တွေက ဘယ်လိုလက်ခံသလဲ။
ဒေါက်တာ ဒေါ်နုနုဆွေ (ဓာတ်ပုံ – ဧရာဝတီ) - ပညာပေးဖြန့်ဝေမှုတွေ အနေနဲ့ရော ဒီလိုပညာပေးရာမှာ ဘယ်လို အခက်အခဲ အတွေ့အကြုံတွေ ရှိသလဲဆိုတာကို မြန်မာနိုင်ငံ ဆရာဝန်အသင်း၊ ရန်ကုန်တိုင်း ဒေသကြီး၊ အမျိုးသမီး ဆရာဝန်များအဖွဲ့က ဒေါက်တာ ဒေါ်နုနုဆွေကို ဧရာဝတီ အယ်ဒီတာ အေးချမ်းမြေ့က တွေ့ဆုံ မေးမြန်းထားပါတယ်။
ဒီအင်တာဗျူးကို ဧရာဝတီ မြန်မာပိုင်းစာမျက်နှာ http://burma.irrawaddy.org/interview/2014/02/03/54287.html မှာလည်း ဖတ်နိုင်ပါတယ်။
မဖတ်ရသေးသူများအတွက် ကူးယူ ဖော်ပြလိုက်ခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။
မေး။ ။ အခု မြန်မာပြည်က လူငယ်တွေ၊ ဆယ်ကျော်သက်တွေအတွက် Sex Education ပေးနိုင်မှုက အိမ်နီးချင်း နိုင်ငံတွေလောက် မလုပ်ပေးနိုင် သေးတဲ့အခြေအနေမှာ ဆယ်ကျော်သက်လူငယ်တွေ အနေနဲ့ ဒီလို Sex ကိစ္စကို စမ်းသပ်ပြီဆိုရင် ဆောင်ရန် ရှောင်ရန်တွေက ဘာတွေရှိနိုင်မလဲ။
ဖြေ။ ။ အဲဒီကိစ္စတွေကို အရင်တုန်းက Sensitive issue ဖြစ်တဲ့အတွက် ဘယ်သူမှလည်း မလုပ်ကြဘူး။
ကျမတို့က ဆရာဝန်အသင်း အနေနဲ့ လွန်ခဲ့တဲ့ ၁၀ နှစ်လောက် ကတည်းက ကျောင်းတွေမှာ သွားပြီး ၆ တန်းကနေ ၁၀ တန်းအထိ အမျိုးသမီး လေးတွေကို စုလိုက်တယ်။ စုပြီးရင် မသဘာဝ ဘာညာပြောတယ်။
သူတို့က သိသင့်သမျှကို သိထားသင့်တယ်။ မသိဘဲနဲ့ စမ်းသပ်တာ အန္တရာယ်များတယ်။
အလင်းရောင်လေးရှိတဲ့ နေရာကိုသွားတာ ကောင်းတယ်လေ။ မှောင်ထဲကို မသိဘဲနဲ့ စမ်းတဝါးဝါးသွားတာ မကောင်းဘူး။
အရမ်း စိုးရိမ်စိတ်ပိုတဲ့ လူကြီးတွေကတော့ ဒါတွေကို ဒီလို အရွယ်လေးတွေမှာသိအောင် ပြောလိုက်ရင် သူတို့တွေရဲ့ စိတ်ကို နှိုးဆွသလို ဖြစ်မလားဆိုပြီးတော့ ဆောင်ရန်ရှောင်ရန် မရောက်ခင်မှာကို အတိုက်အခံ လုပ်ပြီးတော့ အမျိုးသမီးဆရာဝန်အဖွဲ့က မသဘာဝ ဆယ်ကျော်သက်ဘဝ ဆိုပြီးတော့ ပြောတယ်။
အဓိက ကတော့ ဆောင်ရန် ရှောင်ရန်တွေက ဆယ်ကျော်သက်လို့ ပြောလိုက်ပေမယ့် အမျိုးသမီးတွေဘက်က ပိုပြီးတော့နစ်နာဆုံးရှုံးနိုင်ချေ များတယ်လေ။ အဲဒါကြောင့် အမျိုးသမီးတွေကို ပိုပြီးတော့ ဦးစားပေးပြောတယ်။
လူနေမှုစနစ်က တံခါးဖွင့်ဆို၊ ဖွင့်နေတဲ့အချိန်မှာ အကုန်လုံးဝင်လာမယ်။ အဲဒီမှာ ကိုယ်က နည်းမှန်လမ်းမှန်
အသိမပေးဘဲနဲ့ သူတို့ဟာသူတို့ ရှာဖွေမှာပဲလေ။ ဒါ စူးစမ်းတဲ့အရွယ်၊ အဲဒီမှာ မဟုတ်တဲ့၊ မမှန်တဲ့ အချက်တွေတွေ့ရင် အန္တရာယ် အရမ်းများတယ်။
အဲဒါကို မျှော်တွေးပြီးတော့၊ အတိုက်အခံလုပ်ပြီးတော့ ကျောင်းတွေမှာ မ သဘာဝကိစ္စ ပြောတယ်။
အရေးကြီးတဲ့ အန္တရာယ်က ကိုယ်ဝန်တခုတည်း မဟုတ်ဘူး။ လိင်ကတဆင့် ကူးစက်တဲ့ STD လို့ခေါ်တဲ့ အရာတွေရဲ့ အန္တရာယ်။ AIDS ပဲ လူတွေက ကြောက်တာ။
အသည်းရောင် အသားဝါပိုးတွေ၊ အဲဒါတွေကလည်း တသက်လုံး လူလုံးမလှဘူးလေ။
နောက်ဆက်တွဲ ကင်ဆာတွေ၊ ဘာတွေ ဖြစ်တယ်။ အဲဒါမျိုး ဆိုးကျိုးတွေ အများကြီးရှိတယ်။ ဘယ်အသက်အရွယ် မဆို လိင်ကတဆင့် ကူးစက်တဲ့ရောဂါတွေက အန္တရာယ် ဖြစ်တယ်ပေါ့။
ကိုယ်ဝန်ရတယ် ဘာဖြစ်လဲ။ ကိုယ်ဝန်ရသွားရင် ဖျက်ချလိုက်မယ်။ ဖျက်ချပြီးရင် နောက်အပျိုလိုပဲ နေပြီးတော့ အိမ်ထောင်ပြုကြမယ် ပေါ့နော်။ ဒီလူနဲ့ပဲ ယူရင်လည်း ယူမယ်ပေါ့။
အဲဒီလိုမျိုးတွေ တိမ်တိမ်လေးမတွေးဖို့ပေါ့နော်။ ကိုယ့်အတွက်က ဘယ်လောက် အန္တရာယ်များလဲ၊ ကိုယ်ဝန် ဖျက်ချတာရဲ့ နောက်ဆုံး အောင်မြင်သွားတဲ့ လူတွေက ဒီလိုပဲ ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်နဲ့ နေကြတယ်လို့ လူတွေက ထင်တယ်။ ဒါပေမယ့် တကယ်တော့ အဲဒီလိုမဟုတ်ဘူး။
တကယ်လို့ ဒီလူနဲ့ မဟုတ်ဘဲ၊ ကိုယ့်ကို တန်ဖိုးထားတဲ့ လူနဲ့ အိမ်ထောင်ကျပြီး ကလေးယူမယ်ဆိုရင် ကိုယ်လိုချင်တဲ့ အချိန်ကျရင် မရတော့ဘူး။
ဘာဖြစ်လို့လဲ ဆိုတော့ ကိုယ်ဝန်ဆောင်တဲ့ သားအိမ်ကနေ လမ်းကြောင်းတွေကို ဖျက်ဆီးလိုက်တဲ့အချိန်မှာ ပိုးဝင်တယ်၊ အနာဖြစ်တယ် ဆိုရင် အနာရွတ်တွေ ဘာတွေက သားဥပြွန် ဆင်းတဲ့ လမ်းကြောင်းမှာ အနှောင့်အယှက်ဖြစ်တယ်။
နောက်ပြီး ဒီထက်ပိုဆိုးတာက မီးယပ်ပိန်၊ မီးယပ်ခြောက် ဖြစ်တာ။ အိမ်ထောင်ပြုတဲ့အချိန်မှာ ကိုယ့်အိမ်ထောင်ရေး သာယာမှုမရှိတာပေါ့။ ဒါတွေက လူတွေမသိတဲ့ နောက်ဆက်တွဲဆိုးကျိုးတွေပေါ့။
မေး။ ။ ဒီကိစ္စတွေမှာ မိန်းကလေးတွေကို ပညာပေးတယ်ဆိုတော့ ယောက်ျားလေးတွေကရော အန္တရာယ် မရှိနိုင်ဘူးလား။
ဖြေ။ ။ အဲဒီဟာတွေကို လုပ်တာကျတော့ ဆရာဝန်အသင်းမှာ Reproductive health ဆိုတာ၊ ဆယ်ကျော်သက် မျိုးဆက်ပွား ကျန်းမာရေး ဆိုတာ ရှိတယ်။
အဲဒါကတော့ Mobile Educator တွေ ဆင်းပြီးတော့ ပြောတယ်။ အဲဒီမှာ ယောက်ျားလေး တွေကို ဘာပြောလဲဆိုတော့ သူတို့က ကိုယ်ဝန်မရနိုင်လို့ ကိစ္စမရှိတာ မဟုတ်ဘူး။
နောက် ကိုယ့်ဆီကနေ တဆင့် STD ကို ဖြန့်ဖြူးတဲ့ ကိစ္စဟာ အလွန် အရေးကြီးတယ်ဆိုတာ ပြောတာပေါ့။ ကျမတို့ အကြောက်ဆုံးကတော့ တသက်လုံး ကုနေရမယ်၊ လူမှုအသိုင်းအဝိုင်းထဲမှာ ဝန်ထုပ်ဝန်ပိုး ဖြစ်နေမှာလေ။ အဲဒီလိုဆို သူ့လုပ်အားကိုလည်း ဆုံးရှုံးမယ်၊ သူကို ဝိုင်းစောင့်ရှောက်ရတဲ့ လူတွေအတွက်လည်း လုပ်အားဆုံးရှုံးမယ်။ တိုင်းပြည်အတွက်လည်း တိုးတက်ဖွံ့ဖြိုးမှုမှာ နှေးနိုင်မယ် ပေါ့နော်။ အနှောင့်အယှက် ပြုနိုင်တဲ့ ကိစ္စရပ်အားလုံးကို ကျမတို့က ကူညီပြီးတော့ တိုက်ဖျက်ပေးတာပေါ့။ မှန်ကန်တဲ့ အသိ သူတို့မှာ ရှိသွားအောင်ပေါ့။ လူငယ် တော်တော်များများက ဒါကိုလုပ်၊ ဒါမလုပ်နဲ့ဆို မကြိုက်ဘူး။ ဘာလုပ်လဲ ဆိုတော့ ပုဂ္ဂိုလ်ခင်မှ တရားမင်မယ် ဆိုသလိုလေ သူတို့ ယုံကြည်စိတ်ချတဲ့၊ သူတို့အားကိုး စိတ်ချတဲ့ လူကိုပဲ ပြန်ပြီးတော့ Educate လုပ်စေတယ်။ Educate ဆိုတာ ပြောတော့ လွယ်တယ်။ အခုနောက်ပိုင်း ကမ္ဘာမှာ Health Education က Education နဲ့ မပြီးဘူး။ Health Promation နော်၊ Promation လာရမယ်။
မေး။ ။ အခုနောက်ပိုင်းမှာ မလိုချင်ဘဲရတဲ့ ကိုယ်ဝန်ကိစ္စ၊ အဲဒါတွေက ဘယ်လောက်အထိ များလာလဲ။
ဖြေ။ ။ အရမ်းများတယ်။ ကိုယ် လက်တွေ့လုပ်နေတဲ့ ဆေးခန်းမှာဆိုရင်လေ အမျိုးကောင်း သမီးလေးတွေလည်း ရောက်လာတယ်။ သူတို့ဟာ ပိုက်ဆံလိုချင်လို့လည်း မဟုတ်ဘူး၊ အပျော်ရှာချင်လို့လည်း မဟုတ်ဘူး။
ကံမကောင်း အကြောင်း မသင့်လို့ ဖြစ်မယ်။ စောစောကလို Sex Education မရှိတဲ့ဟာ အဓိက အချက်လို့ ထင်တယ်။ ရည်းစားရှိတဲ့ ကောင်မလေး တယောက်ကို သမီးရေ ဒီလိုတော့ မနေနဲ့ ဘယ်အချိန်က ကိုယ်ဝန်ရှိနိုင်တယ်။
ဒါတွေ ကိုယ့်ကို ကျူးလွန်မခံနဲ့ ပြောလိုက်လို့ ရှိရင် ဘယ်အချိန်ကတော့ ဖြစ်နိုင်တယ် ဆိုပြီး အဲဒီအချိန်မှာ တခါတည်း ပါသွားမှာ။ အဲဒါ ဆိုရင် ဘယ်အချိန်မှာ နေလို့ရတယ် ဆိုတာကြီးပါ သင်ပေးသလိုမဖြစ်အောင် အဲဒါ အရမ်းအန္တရာယ် ကြီးတယ် ဆိုတာတော့ ပြောတတ်ဖို့ လိုတယ်။
ကျမတို့က ရယ်စရာပြောတယ် ပေါ့နော်။ ကလေးတွေကို ခိုးစားနည်း သင်အပေးနဲ့ဆိုတာ ကိုယ်ပြောကာမှ သူတို့ ခိုးစားတတ်သွားရင် ဒါကြီးကို ကိုယ်ဝန်လည်း မရနိုင်ပါဘူးကွာဆိုပြီး အဲဒီလိုမျိုး Attitude ဘက် ရောက်သွားမှာ၊ အရမ်း အန္တရာယ်များတယ်။
မေး။ ။ ငယ်ရွယ်တဲ့အချိန်မှာ၊ ဥပမာ – ၁၄ နှစ်ကနေ ၁၆ နှစ်ပေါ့။ အဲဒီလိုဝန်းကျင်မှာ ကိုယ်ဝန်ဆောင်မိ၊ ကိုယ်ဝန်လွယ်မိရင် အန္တရာယ် ဘယ်လိုရှိနိုင်လဲ။
ဖြေ။ ။ ဆေးပညာ အလိုအရတော့ ၁၈ နှစ်ကနေ ၃၅ နှစ်ဟာ ကိုယ်ဝန်ဆောင်ရတာ အသင့်လျော်ဆုံးပဲလို့ ပြောတယ်။ ရုပ်ခန္ဓာ အရတော့ အန္တရာယ်တွေတအား မများဘူးပေါ့နော်။
လူတွေက ထင်တယ်၊ ငယ်ငယ်ရွယ်ရွယ် ဆိုရင်အန္တရာယ်တွေ များတယ်လို့။ အမှန်မှာတော့ သိပ်မရှိဘူးလို့ ပြောတယ်။
စိတ်ကြောင့်၊ စိတ်ဖိစီးမှုတွေရှိပြီးတော့ ရုပ်ခန္ဓာ အားနည်းတာတို့ မစားနိုင်တာတို့ သူတို့ အဆင်သင့် မဖြစ်ရင် သူတို့ အပေါ်မှာ ဒါကြီးက စိတ်ဒဏ်ရာ ရမယ်လို့ ထင်တယ်။
တကယ် အန္တရာယ် များတာကတော့ ၃၅ နှစ်ကျော် ၄၀ သက်ကြီးပိုင်း သားဦးမွေးတာ။
မေး။ ။ အခုအချိန်မှာ Valentine’s Day ကလည်း နီးလာပြီလေ။ Valentine’s Day ဆိုတာ အရင်တုန်းက မြန်မာပြည်မှာ သိပ်ခေတ်မစား ပေမယ့် အခု နောက်ပိုင်း အရမ်း ခေတ်စားလာတယ်။
အဲဒီလို ရက်တွေမှာ စုံတွဲတွေ အတူနေကြမယ် ဆိုတာမျိုး ဖြစ်လာတဲ့အခါကျတော့ အဲဒီနေ့ အတွက်၊ လူငယ်စုံတွဲတွေ အတွက် စကား လက်ဆောင် တခုလောက် ပေးပါလား။
ဖြေ။ ။ လူငယ်တွေအတွက်တင် မကဘူး၊ အဓိက ကတော့ ဘေးက ဝိုင်းဝန်းပြီး မြှောက်ပေးနေတဲ့ မီဒီယာတွေရယ်၊ စီးပွားရေးသမားတွေရယ် အဲဒါတွေကစပြီး ပိတ်ရမှာ။ ကလေးဆိုတာတော့လေ ဒီလိုပဲ မြှောက်ပေးတော့ သူတို့ဟာသူတို့တော့ ဟုတ်တယ်ထင်နေမှာပဲ။ ဘေးက အရမ်းလိုတယ်။
ကိုယ့်ရဲ့ စီးပွားရေးပေါ့။ ကိုယ့်နာမည် ကြော်ငြာတခု အတွက်၊ မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ သားကောင်းရတနာ လေးတွေကို ချောက်ထဲ တွန်းမပို့ စေချင်ဘူး။
အဲဒီနေ့ဆို ဟိုတယ်တွေ ပြည့်လို့ဆိုတာ ကြားတယ်။ တည်းခိုခန်း တွေမှာ အကုန်ပြည့်နေတယ် ဆိုတော့ ဒါ မဖြစ်သင့်ဘူးလေ။ တံခါးဖွင့်တာ ဟုတ်တယ်။
သို့သော်တံခါးဖွင့်လာရင် စောစောက ပြောသလို ဖုန်တွေ သဲတွေ ဝင်လာတဲ့အထဲမှာ ဒီဖုန်ကတော့ အဆိုးဆုံးပဲ။ ဘဝပျက်နိုင်တဲ့ ဖုန်မှုန်တွေ။
အဲဒါတွေကိုတော့ ကာကွယ်ရမယ်ဆိုတော့ ဘေးက ပံ့ပိုးမှုကို ဝိုင်းဝန်းပြီးတော့ပေါ့နော်၊ ဥပမာ – သီချင်းဆို ပြိုင်ပွဲ၊ ဒီလို ရိုးရိုးသားသား လေးတွေတော့ ကောင်းပါတယ်။
ဒါပေမယ့် မြန်မာ့ရိုးရာ အစဉ်အလာ ရှိတယ်လေ - ကိုယ့်ဟာကိုယ် ယူကာမှသာ ယူရော ဒီရည်းစား တယောက် အနေနဲ့ ဘာဖြစ်လို့ ဒီလိုပေါ်တင်ကြီး ဒါ ကျမချစ်သူပါလို့ မိန်းကလေးတွေ အနေနဲ့ရော ပြတာတော့ မကောင်းဘူး။ ဘယ်သူ ကြိုက်ကြိုက် မကြိုက်ကြိုက် ဒါကတော့ ကိုယ့်အမြင်ပဲ - နေရာတကာမှာ ခေတ်ဆန်လွန်းတာ၊ နိုင်ငံခြားကနေ ပုံတူကူးချတာတော့ မကောင်းဘူး။ လူငယ်တွေကို ဘာပြောချင်သလဲ ဆိုတော့
စကားတခွန်းက ချစ်တာက ချစ်ပါ၊ ချစ်လို့ရတယ်လို့။
နောင် တချိန်မှာ နောင်တရစရာ ဆိုတာ ပြန်ပြင်လို့ရမယ့် အမှားဆိုရင် တော်သေးတယ်။
ကိုယ့်ဘဝကို အရိပ်မည်း ထိုးမယ့်ဟာမျိုးကို ဘယ်လိုမှ မလုပ်ပါနဲ့၊ ချစ်သူထားတဲ့အရွယ် ဆိုတာလည်း တနည်းနည်းတော့ ဝေဖန်နိုင်ပြီ၊ စဉ်းစားနိုင်ပြီ၊ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် တန်ဖိုးထားသလို ကိုယ့်ရဲ့ လက်တွဲဖော်ကိုလည်း တန်ဖိုး ထားပါ။
အချစ်နဲ့ Sex ကို မရောထွေးပါနဲ့၊ စောင့်စည်းပြီးတော့ သစ္စာရှိတဲ့ အချစ်ကသာ ဘဝလမ်းကို ဖြောင့်ဖြူးနိုင်ပါတယ် ဆိုတာ ပြောချင်ပါတယ်။
မိတ်ဆွေများအတွက် ကြောင်သားဟင်းလျား(
2/05/2014 06:00:00 AM strange-news
အီတလီနိုင်ငံ Lombardy ဒေသ တောင်ပိုင်းမှာ ကြောင်ဂေဟာတွေကနေ ကြောင်လိုက်ယူပြီးမွေးစားတယ်ဆိုတဲ့သူရဲ့ ရည်ရွယ်ချက်က ဘာတဲ့လဲ။
အဲဒီကြောင်တွေကို ချက်စားဖို့ပါပဲ တဲ့။
ကြောင်လားမြောက်ပြီးသား ကြောင် ၁၅ ကောင် ဝန်းကျင်ကို သူ မွေးစားမယ်ဆိုပြီး ယူသွားတယ်၊ ကြောင်တွေက ဆူဆူဖြိုးဖြိုး မည်းမည်းနက်နက်။
အဲဒီကြောင်တွေကို ချက်ပြီး မိတ်ဆွေတွေကို တည်ခင်း ဧည့်ခံတယ်လို့ ဆိုတယ်။
သူ့မိတ်ဆွေတွေက သူတို့စားလိုက်တာ ကြောင်သားဖြစ်ကြောင်း သိရသလား မသိရသလားဆိုတာ မသေချာပါဘူး တဲ့။
ကြောင်တွေကို ပြန်ခေါ်လာပြီး စစ်ဆေးရေးအစီအစဉ်ကို အဲဒီလူက လုပ်ဆောင်ခြင်း မရှိရာကနေ ကြောင်ဂေဟာတွေက သူ့ကို သံသယ ဖြစ်လာတယ်လို့ ဆိုတယ်။
ဒီလူ့ကို ကြောင်ကယ်တင်ရှင်ကြီးလို့ ထင်ထားရာကနေ သွားစစ်ဆေးကြည့်မှ ဖြစ်ရပ်မှန် ပေါ်လာတယ်လို့ ဆိုတယ်။ ဒီလူက အသက် ၅၀ ကျော်ပါပြီ။
သူ့ကို တိရိစ္ဆာန်တွေကို ညှဉ်းပန်းမှုနဲ့ ထိန်းသိမ်းလိုက်တယ်လို့ သိရပါတယ်။
ပြစ်မှုကျူးလွန်ကြောင်း ထင်ရှားရင်တော့ ထောင်ဒဏ် တနှစ်အထိ အပြစ်ပေးခံရနိုင်တဲ့အမှုပါ။
စာဖတ်သူတယောက်ကတော့ ဒီလို မှတ်ချက်ပြုပါတယ် - ရပ်ကွက်ထဲကကြောင်တွေကို ငါးလေးဘာလေးကျွေးပြီး ဖမ်းလို့ရနေတာပါပဲ တဲ့။
အာရှနိုင်ငံတချို့မှာ ကြောင်သား တင်ရောင်းတဲ့ စားသောက်ဆိုင်တွေရှိကြောင်း၊ အနောက်တိုင်းရောက် အာရှသားတွေထဲမှာတောင် ကြောင်သား အားပေးသူ ရှိကြောင်း မှတ်ချက်တွေ ရေးကြပါတယ်။
ဒီတော့ ကြောင်သားစားခြင်းဟာ ဒေသတချို့ လူတချို့အတွက်တော့ ပုံမှန်အခြေအနေတခုလို့ ဆိုရပါမယ်။
သို့သော်လည်း အများစုက ကြောင်သား စားသုံးခြင်း မရှိတဲ့အတွက် ဒီဖြစ်ရပ်က သတင်းအဖြစ် အွန်လိုင်းထဲရောက်လာတဲ့အတွက် ဧရာဝတီဘလော့ http://blog.irrawaddy.org/ ပရိသတ် ဖတ်ရှုနိုင်ဖို့ ဘာသာပြန် ရေးသား လက်တို့လိုက်ပါတယ်။
တခြား အကောင်တွေကိုလည်း ၀ယ်စားနေတာပဲ၊ ကြောင်သား စားတော့ရော ဘာဖြစ်လဲ ဆိုပြီး မှတ်ချက်ပြုသူလည်း ရှိပါတယ်။
စာဖတ်သူတဦးကတော့ ကြောင်သားဆိုတာ ယုန်သားနဲ့ သိပ်မကွာဘူး တဲ့။
ကြောင်ချစ်သူများအတွက်တော့ ဒီမှတ်ချက်တွေက စိတ်ညစ်စရာဖြစ်နေမယ် ထင်ပါတယ်။
The Irrawaddy အမှတ် ၄ ကို အွန်းလိုင်းက ဖတ်နိုင်ပါပြီ
1/28/2014 10:30:00 PM journals
The Irrawaddy Weekly Journal အတွဲ ၁၊ အမှတ် ၄ ကို download လုပ်ပြီး ဖတ်ရှုနိုင်ပါပြီ။ ပြည်တွင်းမှာ ကြာသပတေးနေ့တိုင်း ဖြန့်ချိကြောင်း သတင်းကောင်း ပါးအပ်ပါတယ်။
အပတ်စဉ် ကြာသပတေးနေ့တိုင်း ပြည်တွင်းမှာ ဖြန့်ချိနေတဲ့ ဧရာဝတီသတင်းဌာနက ထုတ်ဝေတဲ့ ဂျာနယ်ကို အွန်လိုင်းကနေ အောက်ဖော်ပြတဲ့ လင့်ကတဆင့် Download လုပ်ပြီး ဖတ်နိုင်ကြပါပြီ။
ရင်သား သေးငယ်ခြင်းဟာ ဆုလာဘ်လား၊ ကျိန်စာလား
1/27/2014 01:00:00 PM beauty
ရင်သား သေးငယ်ခြင်းဟာ ကောင်းပေစွ လို့ အမျိုးသမီးတချို့က ယူဆ၊ တချို့ကလည်း ဒါဟာ အားငယ်စရာလို့ ယူဆကြတာပါ။
ဆွေးနွေးစရာဖြစ်လာတာက ရင်သား သေးငယ်ခြင်းဟာ ဆုလာဘ်လား၊ ကျိန်စာလား ဆိုတာပေါ့။
ထောက်ခံခြင်း - ဟိုဟိုဒီဒီ လျှောက်သွားတဲ့အခါ ဘရာဇီယာ ဝတ်စရာ မလိုပါ။ ကျောပြင်ဟင်းလင်းဝတ်စုံနဲ့လည်း အဆင်ပြေပါတယ်။
ကန့်ကွက်ခြင်း - ဘရာဇီယာ ဆိုတာ အချိန်အတော်များများ ဝတ်ကို ဝတ်ရမှာ။ ဘာမှ သိပ်မရှိဘူး ဆိုရင်တောင်မှ ဘရာဇီယာ မပါဘဲ နေထိုင်သွားလာခြင်းက လူတောသူတောထဲ လက်ခံနိုင်စရာ မရှိပါ။
ထောက်ခံခြင်း - ဆိုင်တွေမှာ ရှပ်အင်္ကျီဝယ်တဲ့အခါ အိုကေ၏။ ချိတ်ထားတဲ့ရှပ် ကြည့်ကောင်းတယ် ဆိုရင် ရင်သားသေးသူဝတ်ရင် ကြည့်ကောင်းနေရော။
ဆိုင်မှာ ရှပ်ဝယ်ရတာ အင်မတန် စိတ်ချမ်းသာစရာကောင်းပါတယ်။
ကန့်ကွက်ခြင်း - အင်း... ဘီကီနီဝယ်ရင်တော့ စိတ်ချမ်းသာမယ် မဟုတ်။ အပေါ်နဲ့အောက် ဆိုက်မတူဘူးဆိုတော့ ဘီကီနီကို တစစီ ဝယ်ရမှာပဲ။
ဘီကီနီအပေါ်ပိုင်းဟာ ဖော့တုံး အလုံအလောက် မပါဘူးဆိုရင်တော့ ကလေးပိစိကွေးနဲ့ တူနေလိမ့်မယ်။ ဖော့တုံးသိပ်များနေရင်လည်း ပြေးလွှားရာမှာ အဆင်ပြေမည် မဟုတ်။
ထောက်ခံခြင်း - အင်္ကျီတိုနှံ့နှံ့တွေဝတ်လို့ရ။ ဘာမှ ထွက်ကျမှာ မပူရ။
ကန့်ကွက်ခြင်း - အင်္ကျီက အပေါ်မှာအနေတော်၊ အောက်မှာတော့ခပ်ကြီးကြီး ဖြစ်နေတတ်တယ်၊ ဒါကြောင့် ရယ်ဒီမိတ်ဝယ်ဝတ်တာ အဆင်မပြေ၊ စက်ချုပ်ဆိုင်ကို အားကိုးမှ အဆင်ပြေ။
ထောက်ခံပါတယ် - သံကြိုးထိန်းဘရာဇီယာကို အားကိုးစရာ မလိုပါ။ နေရထိုင်ရ သက်တောင့်သက်သာ ရှိလေစွ။
ကန့်ကွက်ပါတယ် - ရင်သားကြီးထွားသယောင် ဟန်ဆောင်ရေးအတွက် အပေါ်တွန်းတင်တဲ့ဘရာဇီယာ လိုမယ်။ သက်တောင့်သက်သာ မရှိလေစွ။
ထောက်ခံပါ၏ - အားကစားလုပ်ရာမှာဝတ်တဲ့ ဘရာဇီယာကို ကြိုးစားကြည့်ပါ။ လေ့ကျင့်ခန်းအတော်များများမှာ အဲဒါ အလုပ်ဖြစ်တယ်၊ ချစ်စရာလည်း ကောင်းတယ်။
ကန့်ကွက်ပါ၏ - အားကစားဘရာဇီယာ... ပြားလွန်းပါတယ်။ Now & Then ဇာတ်ကားထဲ (တွမ်ဘွိုင်းအဖြစ် သရုပ်ဆောင်တဲ့) Roberta က
သူ့ရင်သားမှာ စည်းနှောင်ထားတာတွေကို ဖြေချလိုက်တဲ့ပြကွက်ကို မှတ်မိရဲ့လား။ အားကစားဘရာဇီယာဝတ်ရင် အဲသလို ဖြစ်မှာပဲ။ စည်းနှောင်ဖို့တောင် မလိုအပ်ဘူး။
ထောက်ခံခြင်း - လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ရတာ အဆင်ပြေတယ်။ ဟိုဟိုဒီဒီ မယမ်း မခါတဲ့အတွက် မနာ မကျင်တော့ဘူး။
ကန့်ကွက်ခြင်း - ဝိတ်တက်လာပေမယ့်လည်း အဲဒီနေရာ တက်မလာ။
သဘောတူပါတယ် - ရင်သားကြီးခြင်းနောက်ဆက်တွဲ ခါးနာခြင်းဝေဒနာများဖြစ်လာမှာ စိတ်ပူစရာ မလိုပါ။ ဘရာဇီယာကြိုး ပခုံးထဲ နစ်ဝင်သွားတာမျိုးလည်း မဖြစ်နိုင်ပါ။
သဘောမတူပါ - သေးလွန်းလျှင် မလှ။
ထောက်ခံချက် ကန့်ကွက်ချက်တွေကိုဖတ်ပြီး အင်္ဂလိပ်စာဖတ်သူတွေက အမျိုးမျိုး တုံ့ပြန်နေကြတာပါ။
ဒီစာရေးတဲ့သူ - မူရင်း စာရေးသူ ငတုံး လို့ ဒဲ့ဖဲ့သလို အထောက်အကူဖြစ်စေတဲ့စာစုဆိုပြီး အမွမ်းတင်သူလည်း ရှိတာကို တွေ့ရပါတယ်။-
(ဒီဘလော့ http://blog.irrawaddy.org မှာ ဖော်ပြဖို့အတွက် စည်သူလင်း ဆီလျော်အောင် ဘာသာပြန်ပါတယ်။
နိုင်ငံတကာမှာ ဘာသာမျိုးစုံနဲ့ လစဉ်ထုတ်တဲ့ Cosmopolitan အမျိုးသမီး စာစောင်ကနေ ကောက်နုတ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်)
1/25/2014 08:16:00 AM political-news
၂ဝ၁၂ ခုနှစ်က ထိုင်းနိုင်ငံ၊ ချင်းမိုင်က ဖိုရမ်တခု လာတက်စဉ် ဒေါ်ဘောက်ဂျာ၊ ဓာတ်ပုံ-Seamus Martov / The Irrawaddy)
ကချင်ပြည်နယ် အမျိုးသား ဒီမိုကရေစီ အင်အားစု NDF ပါတီ ဥက္ကဋ္ဌ ဒေါ်ဘောက်ဂျာဟာ ကချင်ပြည်နယ် ဖားကန့်မြို့နယ် တရားရုံးအမိန့်နဲ့ ရဲစခန်းက ဇန်နဝါရီလ ၂၄ ရက် နေ့ က ပြန်လည် လွတ်မြောက်လာပါပြီ။
ဒေါ်ဘောက်ဂျာဟာ ဆေးထိုးလို့ လူသေစေမှု ပုဒ်မ ၃ဝ၄ ( က ) ၊ ဆေးထိုးပြွန်အပ်၊ ဆေးဝါးတွေ လက်ဝယ် ထား သုံးစွဲတယ် ဆိုတဲ့ ယစ်မျိုး ဥပဒေ ပုဒ်မ (၃၃)၊ တရားဝင်လိုင်စင်မရှိဘဲ ဆေးဝါးကုသတယ်ဆို တဲ့ ဆေး ကောင်စီ ဥပဒေ ပုဒ်မ (၄၁) ဆို တဲ့ ပုဒ်မ ၃ ခုနဲ့ တရားစွဲခံခဲ့ရပြီး ဖားကန့်မြို့နယ် ရဲ စခန်းမှာ ယမန်နှစ် ဇူလိုင်လ ကတည်းက ချုပ်နှောင်ခံနေခဲ့ရသူပါ။
ဦးဇော်ဂျာ ကွယ်လွန်ခဲ့မှုတွင် ဒေါ်ဘောက်ဂျာက ဆေးထိုးပေးခဲ့တယ်ဆိုပြီး တရားစွဲထားတဲ့ တရား လို
ဒေါ်ကိုင်ထန် ကိုယ် တိုင်က အမှု ရုပ်သိမ်းလွှာတင်ခဲ့သည့်အပြင် မည်သည့် တရားလိုပြသက်သေ ကမျှ
ဒေါ်ဘောက်ဂျာ အပေါ်ငြိစွန်းအောင် ထွက်ဆိုနိုင်ခဲ့ခြင်းမရှိလို့ ဒေါ်ဘောက်ဂျာ ဆေးထိုးကုသ၍ လူသေပါ တယ်ဆိုတဲ့ ပြစ်မှု ဆိုင်ရာ ဥပဒေ ပုဒ်မ ၃၀၄ (က)နဲ့ စွဲဆိုထားသော အမှု ကို ပြီးခဲ့တဲ့ ဇန်နဝါရီလ ၁၆ ရက်
နေ့က ရုပ်သိမ်းကြောင်း တရားရုံးက အမိန့်ချခဲ့ပြီး ကျန် အမှု ၂ ခုကို ဆက်ပြီး ရင်ဆိုင်နေခဲ့ရတာပါ။
ကျန်အမှု ၂ ခုကို ရင်ဆိုင်နေရစဉ် ယမန်နေ့ကတော့ တရားရုံးက အပြီးသတ်အမိန့်ချမှတ်ပြီး အခုလို လွတ်မြောက်လာတာ ဖြစ်တယ်လို့ ရှေ့နေကွန်ရက်က ဆိုပါတယ်။
အလားတူ ကချင်သတင်းဌာနသတင်းတပုဒ်မှာလည်း ဒေါ်ဘောက်ဂျာကို မနေ့က တရားရုံးက ယစ်မျိုး ပုဒ်မ ၃၃ ကိုတော့ အပြစ်ရှိတယ်အမိန့်ချလိုက်ပေမယ့် ကျန်တာအပြစ်မရှိပဲ လွတ်မြောက်လာတာဖြစ်တယ် လို့ ဖော်ပြထားပါတယ်။
ဒေါ်ဘောက်ဂျာဟာ ဒေသခံ တောင်သူတွေ၊ ပြည်သူတွေကြားမှာ အလွန်လူကြိုက်များပြီး ပြီးခဲ့တဲ့ ၂ဝ၁ဝ ခုနှစ် ရွေးကောက် ပွဲတုန်းက ဖားကန့်မြို့နယ်မှာ NDF ပါတီကိုယ်စားပြု ဝင်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်ခဲ့သူလည်း ဖြစ် ပါတယ်။
ဒေါ်ဘောက်ဂျာကို စွဲဆိုထားတဲ့ အရေးအပါဆုံး ပုဒ်မကို တရားရုံးက ရုပ်သိမ်းပြီး အခြေအနေကို သတင်းထောက် Seamus Martov ရဲ့ Negligent Homicide Charge Against Kachin Politician Dropped မှာလည်း ဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။
11/11/2013 11:40:00 AM political-news
ဗိုလ်ချုပ်ကြီးဟောင်းခင်ညွန့်မှာ အကြံဥာဏ်တွေ အများအပြား ရှိနေပေမယ့် အလဟဿဖြစ်နေဟန်တူပုံကို The Wall Street Journal အွန်လိုင်း သတင်းတပုဒ်မှာ ရေးထားပါတယ်။
မြန်မာပြည်အရေးအရာတွေနဲ့ ပတ်သက်ရင် ဝါရင့်ဗိုလ်ချုပ်ကြီးဖြစ်ခဲ့၊ စစ်အစိုးရရဲ့ထိပ်သီးခေါင်းဆောင်ဖြစ်ခဲ့ဖူးသူတဦးရဲ့ရှုထောင့်ကနေ ပေးနိုင်တဲ့ အိုင်ဒီယာတွေ သူ့ဆီမှာ အသင့် ရှိမှာ သေချာပါတယ်။
The Wall Street Journal ကို သူ ပြောပြထားတာကတော့ ...
"ကျနော့်မှာ အတွေ့အကြုံတွေ အများကြီး ရှိပါတယ်။ သို့ပေသော်လည်း ကျနော့်ကို အတိုင်ပင်ခံအဖြစ် ဗျူဟာချမှတ်သူအဖြစ် ဘယ်သူကမှ အကူအညီလာတောင်းတာ မရှိဘူး။ တယောက်ယောက်က လာပြီးချဉ်းကပ်ရင် ကျနော်က အကြံပေးမှာပါ။ ဒါ ကျနော်တို့နိုင်ငံရဲ့အကျိုးအတွက်ပါ၊ ကျနော်က နိုင်ငံရေးသမားမဟုတ်ဘူး ဆိုတော့
ဘက်လိုက်ပြီးပြောဆိုတာ ရှိမှာ မဟုတ်ပါဘူး" တဲ့။
ဦးခင်ညွန့်က မြန်မာ့နိုင်ငံရေးဇာတ်ခုံမှာ ကာလအတန်ကြာ ကပြခဲ့သူဖြစ်တာကြောင့် နိုင်ငံတကာ စာနယ်ဇင်းတွေက သူ့အကြောင်း ရံဖန်ရံခါ တို့ထိတဲ့နည်းတူ The Wall Street Journal ကလည်း တို့ထိ ရေးသားတဲ့သဘော ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။
မြန်မာစာဖတ်ပရိသတ်တွေထဲမှာလည်း သူ့အကြောင်း စိတ်ဝင်စားသူတွေ ရှိပါတယ်။ သူ့အကြောင်း ပြောဆိုရေးသားတာတွေလည်း ရှိပါတယ်။ မကြာသေးခင်ကလည်း လမ်းပေါ်မှာ တချို့ ပြောနေကြတဲ့၊ ဂျာနယ်စာမျက်နှာပေါ်မှာ ရေးနေကြတဲ့ အကြောင်းအရာတခုကတော့ သူ လွှတ်တော်ထဲ ရောက်ဖို့ ကြိုးစားနေသလား ကြံစည်နေသလား ဆိုတာပါပဲ။ ဒီအကြောင်း ရွေးကောက်ပွဲဝင်ဖို့ ဦးခင်ညွန့် စဉ်းစားနေသလား ဆိုပြီး http://blog.irrawaddy.org/2013/10/blog-post_2679.html မှာ ရေးခဲ့ပြီးပါပြီ။
ဦးခင်ညွန့်မှာ ရှိနေတယ် ပေးလိုပါတယ် ဆိုတဲ့ အကြံဥာဏ်အကြောင်း စဉ်းစားကြည့်ရင် လက်ရှိ အစိုးရ ခေါင်းဆောင်များလည်း အခက်အခဲ အကျပ်အတည်းတွေနဲ့ ရင်ဆိုင်နေရတာပဲ ဆိုတော့ သူတို့က ဦးခင်ညွန့်ဆီမှာ အကူအညီ မတောင်းသင့်ဘူးလား ဆိုတဲ့ မေးခွန်း ထွက်လာပါတယ်။
အစိုးရခေါင်းဆောင်တွေကလည်း ဦးခင်ညွန့်နဲ့ သိပ်တော့ မကွာပါဘူး။ စစ်အစိုးရခေါင်းဆောင်ပိုင်းမှာ နှစ်ပေါင်းများစွာ ထိပ်တန်းနေရာတွေ ယူခဲ့သူတွေပါပဲ။ ဦးခင်ညွန့်အိုင်ဒီယာထွက်သလောက် သူတို့လည်း ထွက်မှာပဲလို့ ယူဆထားကြဟန် တူလို့ အကြံဥာဏ်မတောင်းကြတာလည်း ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
သိပ် အထင်မကြီးလို့ အကြံမတောင်းတာလည်း ဖြစ်နိုင်သလို အထင်တော့ ကြီးပါရဲ့ ... တခုခုကို စိုးရိမ်ရလို့ မချည်းကပ်တာလည်း ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
နိုင်ငံရေးရာသီ မတူတော့တဲ့အတွက် အကြံတောင်းဖို့ စိတ်မကူးကြတာလည်း ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
အဲဒါတွေ တခုမှ မဟုတ်ဘူး ... ငါတော့ အခုပဲ အကြံလှမ်းတောင်းဦးမှ လှမ်းတိုင်ပင်ဦးမှ ဆိုတဲ့သူလည်း ရှိနိုင်ပါတယ်။
ဦးခင်ညွန့်က မြန်မာ့နိုင်ငံရေးမှာ မပတ်သက်တော့ဘူးဆိုတဲ့ ပုံစံမျိုး လေသံပစ်ထားပေမယ့် အကြံပေးဖို့ တိုင်ပင်ဖို့ အသင့်ရှိနေတယ် ဆိုတဲ့ လေသံ ထပ်ပစ်ထားတော့ မြန်မာ့နိုင်ငံရေးမှာ အနည်းဆုံးတော့ နည်းနည်းပါးပါးပတ်သက်ဖို့ အသင့်ရှိနေတယ်လို့ နားလည် ရမယ် ထင်ပါတယ်။
10/19/2013 11:17:00 AM Myanmar-news political-news
နိုင်ငံ့ဂုဏ်ဆောင် အလှမယ်တွေ အခေါင်းသယ်ရခြင်း အကြောင်းရင်း - irrawaddy
10/18/2013 09:11:00 AM celebrity-news
အောက်တိုဘာ ၇ ရက်နေ့က နာရေးကူညီမှုအသင်းတွင် ဝင်ရောက် ကူညီပေးနေသည့် နန်းခင်ဇေယျာနှင့် ခင်ဝင့်ဝါတို့ကို တွေ့ရစဉ် (ဓာတ်ပုံ – Miss Supranational Myanmar facebook မှ)
နိုင်ငံ့ဂုဏ်ဆောင် အလှမယ်တွေ အနေနဲ့ နာရေးကူညီမှုအသင်းမှာ ဝင်ရောက်ပြီး ပရဟိတ လုပ်ငန်းတွေ လုပ်ကိုင်နေကြတဲ့ နန်းခင်ဇေယျာနဲ့ ခင်ဝင့်ဝါတို့ကို သာဓုခေါ်သူတွေ ရှိသလို တချို့ကလည်း ပေါ်ပြူလာဖြစ်ချင်လို့လား ဆိုတဲ့ မေးခွန်း ထုတ်နေ သံတွေ ကြားနေရပါတယ်။
အဲဒါနဲ့ ပတ်သက်လို့ နန်းခင်ဇေယျာကတော့ သူတို့ကို ပေါ်ပြူလာ ဖြစ်ချင်လို့ လုပ်တာလားလို့ မေးတဲ့သူတွေကို သူတို့ ဘယ်လို လုပ်နေသလဲဆိုတာ မြင်စေချင်တယ်လို့ ပြောပါတယ်။ နန်းခင်ဇေယျာက အလှမယ်အဖြစ် တနိုင်ငံလုံးက အသိအမှတ်ပြုပြီး နောက်ပိုင်း နာရေးကူညီမှု အသင်းမှာ တလကို နှစ်ကြိမ် လုပ်အားပေးဖို့ စာရင်းပေးထားတယ်လို့ သိရပါတယ်။
ခင်ဝင့်ဝါကလည်း ဒီအလုပ်ကို သူ ၈ တန်းနှစ် ကတည်းက လုပ်ချင်ခဲ့ပေမယ့် အသက်ငယ်လို့ လုပ်ခွင့်မရခဲ့ဘူး၊ အခု ငွေသွား လှူဒါန်းရင်းနဲ့ အလောင်း တသောင်းပြည့် အစီအစဉ်နဲ့ ကြုံကြိုက်လို့ ဝင်ရောက် လုပ်ကိုင်ခွင့် ရခဲ့တယ်လို့ ဧရာဝတီကို ပြောပါတယ်။
နာရေးကူညီမှု အသင်းရဲ့ ဦးဆောင်သူ ဦးကျော်သူကတော့ “ဒီလိုပရဟိတ အလုပ်ကိုလုပ်ဖို့ ကျနော်မတိုက်တွန်းပါဘူး၊ သူတို့အသိစိတ်နဲ့ သူတို့ လုပ်ဖို့ လာကမ်းလှမ်းတာပါ။ သူတို့ အလှူငွေလာလှူရင်း ဒီလို ပရဟိတ အလုပ်ကို သူတို့ လုပ်ချင်တယ်ဆိုပြီး လုပ်တာပါ။ နန်းခင်ဇေယျာကတော့ တလကို နှစ်ကြိမ်လာပြီး လုပ်အားပေးပါတယ်။ ခင်ဝင့်ဝါက သူငွေလာလှူပြီး နောက်နေ့မှာ တသောင်းပြည့် အစီအစဉ်ရှိတယ်၊ အဲဒါ လာစေချင်တယ် လာမလား ဆိုတော့ သမီး စာမေးပွဲပြီးတာနဲ့ လာခဲ့မယ်ဆိုပြီး ရောက်လာပြီး သူလာလုပ်ပေးတာ” လို့ ဆိုပါတယ်။
ဦးကျော်သူက သူကိုယ်တိုင်လည်း အနုပညာသမားဘဝကနေ ပရဟိတ အလုပ်ကို ပြောင်းလုပ်ခဲ့သလို၊ ဘယ်သူပဲ ဖြစ်ဖြစ် ပရဟိတ အလုပ်လုပ်တာ ကောင်းတာလုပ်တာ ဖြစ်တဲ့အတွက် နိုင်ငံ့ဂုဏ်ဆောင် အလှမယ်တွေ အနေနဲ့လည်း ဒီလိုပဲ ဖြစ်ရမှာပဲလို့ ဆက်ပြောပါတယ်။
“ဒီလို နာမည်ရှိတဲ့သူ တယောက်က ပရဟိတ အလုပ်ကို လုပ်တယ်ဆိုတော့ ကိုယ့်ရဲ့ ပရဟိတ လုပ်ငန်းလည်း ပို အောင်မြင် တာပေါ့။ အများအတွက်လည်း ပိုအကျိုးရှိတာပေါ့။ သူတို့ကို ပေါ်ပျူလာဖြစ်ချင်လို့ လုပ်တယ်လို့ ဝေဖန်တဲ့သူတွေကို ကျနော် ဟြေပြချင်တာက ကျနော်လုပ်တုန်းက ကျတော့ ဘာဖြစ်လို့ မဝေဖန်ကြတာလဲလို့ မေးချင်တယ်။ ကျနော် မင်းသားဘ၀ကနေ နာရေးကူညီမှု လုပ်တော့ ကျော်သူ ပေါ်ပျူလာဖြစ်ချင်လို့ လုပ်တာလားလို့ ဘာလို့မဝေဖန်ကြတာလဲ။ သူတို့ အသက်အရွယ် တုန်းက ကျော်သူတို့ အဲဒီလောက် ပရဟိတ မလုပ်နိုင်ခဲ့ဘူး။ သူတို့ အသက်အရွယ်လေးနဲ့ ပရဟိတစိတ် မွေးလာတယ် ဆိုတော့ ကျနော်တို့က လက်ကမ်းကြိုရမှာပဲ၊ ဟြေသမျှကို လိုက်နားထောင် နေရင်တော့ ကိုယ်လုပ်သမျှ ခြေလှမ်းတွေ ရှေ့ရောက်မှာ မဟုတ်ဘူး” လို့ ဦးကျော်သူက ဆိုပါတယ်။
နန်းခင်ဇေယျာနဲ့ ခင်ဝင့်ဝါတို့ အနေနဲ့လည်း ဘေးက ဘာဟြေဟြေ ကိုယ့်လုပ်ရပ် မှန်ကန်ဖို့၊ ကိုယ့်သီလလုံဖို့ပဲ လိုတယ်၊ ကိုယ်လုပ်စရာ ရှိတာ ဆက်လုပ်ဖို့ပဲ အရေးကြီးတယ်၊ ဘေးစကား နားထောင်နေရင်တော့ ကိုယ့်ခြေလှမ်းတွေ နှေးသွားမယ်၊ ရပ်သွားမယ်၊ သူ့အနေနဲ့ မလုပ်တဲ့အရွယ်မှာ နိုင်ငံ့ဂုဏ်ဆောင် အလှမယ်တွေက လုပ်နိုင်တဲ့အတွက် ဂုဏ်ယူတယ်၊ ချီးကျူးတယ်လို့ ဦးကျော်သူက ပြောပါတယ်။
အခု အချိန်မှာ နာရေးကူညီမှုအသင်းမှာ ဝိုင်းဝန်းကူညီတဲ့အထဲ နန်းခင်ဇေယျာတို့၊ ခင်ဝင့်ဝါတို့အပြင် ဆီးဂိမ်း သီချင်းရေးတဲ့ တေးရေး လူငယ်တွေပါ ပါလာပြီလို့ သိရပါတယ်။
“ကျနော်တို့ ပရဟိတ လောက အတွက်တော့ ဂုဏ်ယူစရာပါပဲ။ ဒီလို ပရဟိတ အလုပ်က တခါလုပ်ပြီးရင်ကို စွဲလမ်း သွားတတ်တယ်။ ကာယကံရှင်တွေရဲ့ အပူမီးကို ငြိမ်းအေးစေနိုင်တယ် ဆိုတော့ ဒီအလုပ်ကို သူတို့ ဆက်လုပ်မယ် လို့လည်း ယုံကြည်တယ်။ သူတို့တင်မကဘူး၊ ကိုလူချောအဖွဲ့၊ စာပေ လောကက ဆရာ၊ ဆရာမတွေပါ ကျနော်တို့နဲ့ လက်တွဲပြီး လာလုပ် ပေးဖူးတယ်။ ဒီကလေးတွေ ဒီလိုလုပ်နိုင်တဲ့ အတွက်လည်း ကျနော် ပီတိဖြစ်မိပါတယ်။ နာရေး ဆိုတာ အနိမ့်ကျဆုံး အလုပ်လို့ သတ်မှတ်ထားတာကို သူတို့ သတ္တိရှိရှိနဲ့ ရဲရဲဝံ့ဝံ့ လာပြီး အခေါင်းသယ်တာတွေ လုပ်တာ တော်ရုံသတ္တိနဲ့ မရဘူး၊ ပရဟိတ အလုပ်ဆိုတာ လူသားတိုင်းလုပ်ရမယ့် အလုပ်ပဲ၊ ကိုယ်တိုင် ပရဟိတ စိတ်ဓာတ် မွေးဖို့လည်း လိုသလို၊ အသင်းအဖွဲ့နဲ့ လုပ်တတ်တဲ့ ပရဟိတစိတ် ရှိဖို့လည်းလိုတယ်။ Miss တွေမှ မဟုတ်ဘူး၊ ဘယ်သူမဆို၊ ဒီဇိုင်နာတွေပဲ ဖြစ်ဖြစ်၊ ကာယဗလမောင် တွေပဲဖြစ်ဖြစ် ကျနော်က လက်ခံရမှာပဲ။ ဒါက ပရဟိတစိတ်နဲ့ လုပ်ရတဲ့ အလုပ်ဖြစ်တဲ့အတွက် ဘယ်သူ့ကို မဆို ကျနော်လက်ခံမှာပါ” လို့ ဦးကျော်သူက ရှင်းပြပါတယ်။
နန်းခင်ဇေယျာကတော့ နာရေးကူညီမှု အသင်းမှာ အသင်းဝင်ထားတာ ၆ လလောက် ရှိပါပြီ။ သူ့အနေနဲ့ အစပိုင်းမှာ ဦးကျော်သူနောက်ကို ဒီအတိုင်းပဲ လိုက်လေ့လာတာ၊ အလှူငွေပဲ ထည့်တာမျိုးလုပ်ခဲ့ပေမယ့် ဦးကျော်သူက တဆင့်ချင်း ရှင်းပြတဲ့အချိန်မှာ ကိုယ်တိုင် ပါဝင် လုပ်ဆောင်ချင်တဲ့စိတ် ဖြစ်လာတာနဲ့ တလကို နှစ်ခေါက်လုပ်မယ် ဆိုပြီး ပါဝင်ဖြစ်ခဲ့တာလို့ သိရပါတယ်။
“အခုတော့ အသင်းဝင်အဖြစ် လုပ်နေပါပြီ။ ဒီအလုပ်ကို လုပ်တာ ညီမက အယူသီးတာတွေလည်း ပျောက်စေချင်တယ်၊ သူများတွေက ဒီအလုပ်ကို အနိမ့်ကျဆုံး အလုပ်လို့ ထင်ထားတာလေ။ ဒါပေမယ့် လူဆိုတာ နောက်ဆုံးတော့ သေရမှာပဲလေ။ လူတယောက်ရဲ့ နောက်ဆုံးခရီးကို ပို့ပေးရတာလည်း အရမ်း မြင့်မြတ်ပါတယ်။ အဲဒါကြောင့်လည်း ညီမ လုပ်ဖြစ်သွားတာပါ။ ညီမ ကိုယ်တိုင် အခေါင်းသယ်ပေးတဲ့ အတွက် သူတို့ရဲ့ အပူကို တ၀က်လျော့ကျသွားအောင် လုပ်ပေးနိုင်တယ်လို့ထင်တယ်၊ ညီမ ကိုယ်တိုင် လာသယ်ပေးတဲ့အတွက် နာရေးရှင်ရဲ့ မိသားစုတွေကလည်း ၀မ်းသာကြတယ်၊ ညီမလည်း ဒီလို လုပ်ပေးရတဲ့ အတွက် အရမ်းကို ပီတိဖြစ်ရပါတယ်၊ ဒီပီတိက ပိုက်ဆံနဲ့လည်း ၀ယ်ယူလို့မရတဲ့ ပီတိပါ” လို့ နန်းခင်ဇေယျာက ဆိုပါတယ်။
ချမ်းသာတဲ့ သူဖြစ်ဖြစ်၊ ဆင်းရဲတဲ့ သူဖြစ်ဖြစ် ဘယ်သူမဆို ဒီလမ်းကို သွားရမှာပဲ ဆိုတာကို နန်းခင်ဇေယျာအနေနဲ့ သံဝေဂ ရခဲ့တယ်၊ အရင်က ဒီလို အသင်းတွေ မရှိခဲ့ဘဲ၊ အခုနောက်ပိုင်းမှ ရှိလာကြတာ ဖြစ်တဲ့အတွက် လုပ်ခွင့်ရချိန်မှာ ဒီအလုပ်ကို တလ နှစ်ကြိမ် လုပ်ပါမယ်ဆိုပြီး ဦးကျော်သူကို ခွင့်တောင်းတော့ ခွင့်ပြုတယ်လို့ နန်းခင်ဇေယျာက ရှင်းပြပါတယ်။
“ညီမ အသက်ရှင်နေသရွေ့ ဒီ ပရဟိတအလုပ်ကို လုပ်သွားမှာပါ။ ညီမကို ပေါ်ပျူလာ ဖြစ်ချင်လို့ လုပ်တာလို့ ဟြေတဲ့ သူတွေကိုလည်း ညီမ လက်တွေ့မြင်ချင်တယ်။ လူတယောက်က ပေါ်ပျူလာ ဖြစ်ချင်တယ်ဆိုရင် ခဏပဲ လုပ်ပြီး ပျောက်သွားမှာပါပဲ။ ပရဟိတ လုပ်နေတဲ့သူတွေရဲ့ စိတ်ထား၊ အလုပ်နဲ့ လုပ်ကိုင် ဆောင်ရွက်မှုတွေကို ပရဟိတ လုပ်တဲ့သူတွေပဲ သိပါတယ်” လို့ သူက ဆိုပါတယ်။
ဒီလိုအလုပ်ကို လုပ်ခွင့်ရတဲ့အတွက် အရမ်း ၀မ်းသာဂုဏ်ယူမိကြောင်း၊ ဦးကျော်သူက သူ့ကို ဒီလို ယုံယုံကြည်ကြည်နဲ့ အခေါင်းသယ်ခွင့် ပေးတဲ့အတွက် အရမ်းလည်း ကျေးဇူးတင်သလို ဂုဏ်ယူမိကြောင်း၊ သူ့အနေနဲ့ နာရေးကူညီမှု အသင်းတွင်မကဘဲ အနာကြီး ရောဂါသည် စောင့်ရှောက်ရေး၊ HIV/ AIDS ဝေဒနာရှင် ကလေးငယ်တွေ၊ အဖိုးအဖွားတွေ စောင့်ရှောက်ရေး၊ ကင်ဆာ ကလေးငယ်တွေ၊ နယ်မှာရှိတဲ့ ကလေးတွေရဲ့ပညာရေးနဲ့ လမ်းမှားရောက်နေတဲ့ ကလေးတွေကို နှစ်သိမ့်ဆွေးနွေး ပညာပေးတာ အစရှိတဲ့ ပရဟိတ လုပ်ငန်းတွေမှာလည်း ကူညီ လုပ်ကိုင်ပေးတယ်လို့ နန်းခင်ဇေယျာက ဆက်ပြောပါတယ်။
“ညီမက ပြန်ကြားရတဲ့ Comment တွေကို မကြည့်ဘူး။ ညီမလုပ်နေတဲ့ အလုပ်တွေကိုပဲ အာရုံစိုက်ပါတယ်။ ပရဟိတ အလုပ်က ဘာအလုပ်ပဲ ဖြစ်ဖြစ် မွန်မြတ်တော့ တခေါက်လုပ်လိုက်ရင်ကို ခဏခဏ လုပ်ချင်တဲ့ စိတ်တွေ ဖြစ်လာပါတယ်။ ဒီလို အနိမ့်ကျဆုံးလို့ လူတွေ သတ်မှတ်ထားတဲ့ အလုပ်ကို လုပ်တဲ့အခါမှာ ရွံတာတွေ၊ မသတီတာတွေ မဖြစ်ပါဘူး။ ညီမ အတွက်တော့ လူအားလုံးက နံပါတ်တစ်ပါပဲ” လို့ သူက ဆက်ပြောပါတယ်။
ခင်ဝင့်ဝါကတော့ နန်းခင်ဇေယျာရဲ့ ပရဟိတ လုပ်နိုင်မှုတွေနဲ့ စိတ်ဓာတ်ကို လေးစား အားကျတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
“မနန်းခင်က လူမှုရေး လုပ်ငန်းတွေလည်း အရမ်းလုပ်နိုင်တယ်၊ အရမ်းလည်း စိတ်သဘောထား ကောင်းတော့ သူ့ကိုလည်း အားကျမိတာလည်း ပါတယ်၊ မနန်းခင်နဲ့ တွေ့မယ်လို့လည်း ထင်မထားမိဘူး၊ သူနဲ့အတူတူ ဒီလို ပရဟိတ အလုပ် လုပ်ခွင့်ရတဲ့အတွက် ၀မ်းသာမိပါတယ်။ Miss ဆိုတာကလည်း လူသားတယောက်ပါပဲ၊ နာမ်စား တခု သတ်မှတ် ပေးလိုက်တဲ့ အတွက်ကြောင့်သာ ဒီလို Miss ဆိုတာ ဖြစ်လာရတာပါ။ အကုန်လုံးက လူသားတွေပါပဲ၊ ဘယ်သူမှ လူမှုရေးလုပ်ငန်း၊ ပရဟိတလုပ်ငန်း လုပ်ရမယ်လို့ မဟုတ်ပါဘူး၊ ဘယ်သူမဆို ဒီလိုပရဟိတ အလုပ်တွေကို လုပ်သင့်ပါတယ်” လို့ ခင်ဝင့်ဝါက ပြောပြပါတယ်။
လူသားချင်း စာနာတတ်တဲ့စိတ်၊ ကူညီတတ်တဲ့စိတ် ရှိရင် ဘယ်သူမဆို ဒီအလုပ်ကို လုပ်လို့ရတယ် ဆိုတဲ့ အကြောင်း၊ Miss တယောက် ဆိုပြီး ဒါမျိုးမလုပ်နိုင်ဘူး ဆိုတဲ့စိတ်မျိုး မရှိကြောင်း၊ ပရဟိတ အလုပ် ဘယ်အလုပ်မဆို လုပ်သွားမှာ ဖြစ်တဲ့ အကြောင်း၊ တလကို တရက်တော့ ဒီ ပရဟိတ အလုပ်ကိုလုပ်မယ် ဆိုတဲ့အကြောင်း ခင်ဝင့်ဝါက ရှင်းပြပါတယ်။
“သူများရဲ့ နောက်ဆုံးခရီးကို လိုက်ပါပို့ဆောင် ကူညီရတာ အရမ်းမွန်မြတ်ပါတယ်။ မသာတခေါက် ကျောင်းဆယ်ခေါက် ဆိုတဲ့ စကားပုံလည်း ရှိတာပဲလေ၊ သံဝေဂရစရာပါပဲ။ ဒီအလုပ်ကိုလုပ်တဲ့ ဦးကျော်သူကိုလည်း လေးစားတယ်၊ ကိုယ့်ကို လုပ်ဖို့ အခွင့်အရေး ပေးလာတဲ့အတွက် မသတီတာတွေ၊ ရွံတာတွေလည်း မရှိပါဘူး။ ညီမတို့ကို တချို့တွေက ဟြေကြတယ်၊ Miss ဖြစ်မှ ပေါ်ပျူလာ ဖြစ်ချင်လို့ လုပ်ကြတာလား ပေါ့နော်၊ အမှန်အတိုင်း ဟြေရရင် ညီမတို့ Miss မဖြစ်ခင် ဒီလို အလုပ်လုပ်လည်း ဘယ်သူမှ သတိထားမိမှာ မဟုတ်ဘူးလေ။ လူသတိထားမိတဲ့သူ တယောက် ဖြစ်တော့မှ ဒီအလုပ်ကိုလုပ်တော့ လူသတိထား မိမှာလေ၊ ပေါ်ပျူလာ ဖြစ်ချင်လို့ လုပ်တာမဟုတ်ပါဘူး၊ တကယ် ၀ါသနာပါလို့ရယ်၊ ပရိသတ်တွေ ပီတိဖြစ်အောင် မျှဝေတဲ့ သဘောနဲ့ပါ လုပ်တာပါ။ ဒီနေရာကို တနေ့ ကိုယ်လည်းရောက်ပြီး သေရမှာဆိုတော့ စာနာတဲ့စိတ်နဲ့ လုပ်တာလည်း ပါပါတယ်” လို့ ခင်ဝင့်ဝါက ဆိုပါတယ်။
ခင်ဝင့်ဝါ အနေနဲ့ နန်းခင်ဇေယျာလိုပဲ တခြား ပရဟိတ အလုပ်တွေလည်း လုပ်မှာ ဖြစ်တဲ့အကြောင်း၊ ဦးကျော်သူလို အနုပညာ အလုပ်မှာရော၊ ပရဟိတ လုပ်ငန်းမှာပါ အောင်မြင်အောင် လုပ်နိုင်တဲ့ သူတယောက်၊ သူ လေးစား အားကျရတဲ့ သူတယောက်နဲ့ အခုလို ပရဟိတ အလုပ်ကို အတူတွဲ လုပ်ခွင့်ရတဲ့အတွက် ၀မ်းသာမိကြောင်း ဧရာဝတီကို ပြောပါတယ်။
10/02/2013 01:00:00 PM articles
အိန္ဒိယမှာ ဖြစ်ထွန်းနေတဲ့ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတခုကတော့ အငှားဗိုက်အကျိုးဆောင်လုပ်ငန်းပါ။
ကမ္ဘာအရပ်ရပ်က ကိုယ်ဝန်ဆောင်ဖို့ အခက်အခဲရှိသူ၊ ကလေးမရနိုင်သူအများအပြားဟာ အိန္ဒိယက ဒီလုပ်ငန်းကို ချိတ်ဆက် ကလေးယူနေကြပါတယ်။
သူတို့ကိုယ်တိုင် ကိုယ်ဝန်မဆောင်ဘူး ဆိုတော့ သူတို့ရဲ့ ကိုယ်စား အိန္ဒိယမှာ ရှိတဲ့ အမျိုးသမီးတချို့ကို ကိုယ်ဝန်ဆောင်စေခြင်းပါပဲ။
မွေးလာတာ ရက်ပိုင်းပဲ ရှိသေးတဲ့ သမီးလေး Gabriella
မိဘများက Rekha Patel, 42 နဲ့ Daniele Fabbricatore, 39တို့ ဖြစ်ပါတယ်။ (Photo: Reuters)
အလုပ်အပ်သူများထဲမှာ လိင်တူစုံတွဲများလည်း ပါတာပေါ့။
လိင်တူတယ်ဆိုမှတော့ ကလေးရဖို့က ဒီနည်းပဲ ရှိပါတော့မယ်။
အခု အိန္ဒိယမှာ နည်းနည်းလေး ဆူညံလာတာက ... ဒီလုပ်ငန်းက ဆင်းရဲတဲ့ အိန္ဒိယအမျိုးသမီးတွေကို အမြတ်ထုတ်သလို ဖြစ်နေတယ် ဆိုပြီး ငြင်းခုံလာကြတာပါပဲ။
ပြည်ပကနေ ကလေးမွေးလိုသူတွေ အိန္ဒိယကို လာပြီး အငှားဗိုက်ရှာဖွေရ ခက်ခဲစေမယ့် ဥပဒေမျိုး ပြဋ္ဌာန်းရေးလည်း ပါဝင်တာပေါ့။
ဘုံဘေမှာ အခြေစိုက်တဲ့ Surrogacy India ဆိုတဲ့ အကျိုးဆောင်လုပ်ငန်းက အငှားဗိုက်နဲ့ ကလေး ၂၉၅ ယောက် မွေးအောင် ဆောင်ရွက်ပေးခဲ့ပြီးပြီ၊
အများစုက ပြည်ပက လာအပ်တဲ့ဖောက်သည်တွေ ဖြစ်တယ်လို့ ဆိုတယ်။ ၄၀ ရာနှုန်းက လိင်တူစုံမက်မိဘတွေဖြစ်ပါသတဲ့။ ဒါက ၆ နှစ်အတွင်း သူတို့လုပ်ငန်းရဲ့ ကိန်းဂဏန်းတွေပါ။
အဲဒီအကျိုးဆောင်လုပ်ငန်းက Dr. Sudhir Ajja ရဲ့ တွက်ချက်မှုကတော့ ပြည်ထဲရေးဌာနကအကြံပြုထားတဲ့အတိုင်း ဥပဒေ စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းတွေ တင်းကျပ်လာရင်
ဒီလုပ်ငန်းကို သေချာပေါက် ထိခိုက်ပါလိမ့်မယ်၊ ပြည်ပက အလုပ်လာအပ်နှုန်းလည်း ကျသွားပါမယ် တဲ့။
အိန္ဒိယမှာ ဒီလုပ်ငန်း အစပြုနေတာ ၁၁ နှစ် ရှိပါပြီ။
အမျိုးသမီးတွေကို အခကြေးငွေပေးပြီး အငှား ကိုယ်ဝန်ဆောင်ခြင်းကို ခွင့်ပြုထားတာ နိုင်ငံ နည်းနည်းလေးပဲ တွေ့ရမှာပါ။
အိန္ဒိယ၊ ဂျော်ဂျီယာ၊ ရုရှ၊ ထိုင်း၊ ယူကရိန်း၊ အမေရိကန်တို့ပါပဲ။ အမေရိကန်ဆိုပေမယ့် တနိုင်ငံလုံးမဟုတ် - ပြည်နယ်တချို့မှာ ခွင့်ပြုပါတယ် တဲ့။
ခွင့်ပြုတဲ့နိုင်ငံနည်းပါးတယ် ဆိုတဲ့ အချက်အပြင် တခြားအကြောင်းအရာတွေလည်း အိန္ဒိယမှာ ရှိနေပါတယ်။
နည်းပညာအတွက်ကုန်ကျစရိတ်နည်းပါး၊ ကျွမ်းကျင်တဲ့ဆရာဝန်တွေရှိ၊ စာရွက်စာတမ်းကိစ္စလိုမျိုး ကြိုးနီစနစ် နည်းပါး၊ ဗိုက်အငှားလိုက်မယ့်အမျိုးသမီးပေါများ ဆိုတဲ့
အချက်တွေကြောင့် အိန္ဒိယကို ဒီလုပ်ငန်းအတွက် နှစ်သက်နေကြတာပါ။
အိန္ဒိယမှာ ဒီလုပ်ငန်းအကျိုးဆောင်ပေးတဲ့ဆေးဘက်ဆိုင်ရာဌာနပေါင်း ၃,ဝဝဝ ရှိမယ်၊ ဒီလုပ်ငန်းကနေ ၀င်ငွေ ဒေါ်လာ သန်း ၄၀၀ ထက်မနည်း ရှိနေပြီ လို့ မနှစ်တုန်းဆီက ထွက်လာတဲ့ လေ့လာချက်တခုက ဆိုပါတယ်။
ကုလသမဂ္ဂ ပါဝင်တဲ့ လေ့လာချက်ဖြစ်ပါတယ်။
ဗြိတိန်၊ အမေရိကန်၊ သြစတေးလျ၊ ဂျပန် စတဲ့ စတဲ့ တိုင်းပြည်တွေက ဒီလုပ်ငန်းအတွက် အိန္ဒိယသွားကြပါတယ်။ အိန္ဒိယမှာ နာမည်အရဆုံးကတော့ Gujarat ပြည်နယ် Anand မြို့မှာရှိတဲ့ Akanksha ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။
အငှားကိုယ်ဝန်ကို တကြိမ်မက ဆောင်ပေးတဲ့အမျိုးသမီးတွေလည်း ရှိမှာပဲ။ ၀င်ငွေကလည်း မက်လောက်စရာ ဖြစ်နေတယ် မဟုတ်လား။
ဘယ်လောက်ရသလဲဆို ... အထက်မှာ ရေးခဲ့တဲ့ Anand မြို့လေးမှာ ဆိုရင် အိမ်တလုံးတောင် ၀ယ်နိုင် ဆိုပဲ။
အိမ်ဝယ်နိုင်တဲ့ငွေပမာဏရရှိဖို့ အမျိုးသမီးတချို့ အငှားကိုယ်ဝန်ဆောင်နေကြတယ်ဆိုပါစို့။
လတ်တလော ဥပဒေထဲမှာတော့ ဒီလိုကိုယ်ဝန်ဆောင်ဖို့ဆိုရင် အသက် ၂၁ နဲ့ ၃၅ အတွင်း ရှိမှ ဖြစ်မယ်၊
ကိုယ်ဝန်ဆောင်ပေးသူကို ကျန်းမာရေးအာမခံချက် ရှိအောင် လုပ်ပေးရမယ်၊ ဟိုစုံတွဲနဲ့ သူနဲ့ကြား စာချုပ်ချုပ်ရမယ် စသဖြင့် သတ်မှတ်ထားပါတယ် တဲ့။
ဒါကတော့ India Seeks to Regulate Its Booming ‘Rent-a-Womb’ Industry ဆိုတဲ့ သတင်းကို ဖတ်ကြည့်ပြီး ပြန်ပြောပြတာပါ။ ဧရာဝတီသတင်းဌာနရဲ့ အွန်လိုင်း http://www.irrawaddy.org/archives/44962 မှာ ဒီမနက် တက်လာတဲ့သတင်းဆောင်းပါးပါ။ အကျိုးဆောင်လုပ်ငန်းတွေဟာ အကျိုးဆောင်မွေးမိခင်တွေက ဗိုက်ထဲက သူ့ကလေး မဟုတ်တဲ့ ကလေးကို မေ့ထားဖို့၊ ကိုယ့်ရင်သွေးမဟုတ် - ကိုယ်နဲ့မဆိုင် - အလုပ်သဘောအရ တော်စပ်တဲ့ကလေးလို့ပဲ သဘောထားဖို့ သင်ပေးမယ် ထင်ပါရဲ့။ ဒါမှ နောက်ဆက်တွဲပြဿနာ နည်းမယ်၊ နှစ်သိမ့်ဆွေးနွေးပညာပေးတာမျိုးတွေ လုပ်ရမှာ နည်းပါလိမ့်မယ်။
အင်း ... "သူ့ကလေး မဟုတ်" ဆိုတဲ့စကားလုံးကိုသုံးရတာတော့ အားနာပါရဲ့။
မွေးလာတဲ့ကလေးမှာ မိဘ ၃ ဦး ရှိနိုင်ပါတယ်။
ကိုယ်ဝန်ဆောင်မိခင်မှာ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာထိခိုက်မှု ဘယ်လောက်အထိ ရမယ် မသိပါ။ အနည်းနဲ့အများ ရကြပါလိမ့်မယ်။
ဟိုမိဘနှစ်ပါးကရော ကလေးအပေါ် သားသမီးအရင်းလို ချစ်နိုင်ကြမလား။ အင်း .... ချစ်ကြမယ် ထင်ပါရဲ့။
ကလေးကရော .. ဘာထိခိုက်မှု ရှိမလဲ။
ကလေးဆိုတာ ဗိုက်ထဲမှာ ရှိတုန်းကတည်းက မိခင်နဲ့ ရုပ်ပိုင်းရော စိတ်ပိုင်းပါအဆက်အသွယ်ရှိတယ်လို့ ကြားဖူးပါတယ်။
ကိုယ်ဝန်ဆောင်မိခင်က ဗိုက်ထဲကဒီကလေးကို မွေးပြီးပြီးချင်း ခွဲခွာ ရတော့မယ် ဆိုတာ သိထားတော့ ကိုယ်ဝန်ဆောင်စဉ်ကာလမှာ သူ့ဗိုက်ကို ဗိုက်ထဲက ပိစိလေးကို ဘယ်လို သဘောထားမလဲ။
အဲဒီသဘောထားတွေကြောင့် ကလေးမှာ ဘယ်လို သက်ရောက်မှု ရှိမလဲ။ အင်း... တွေးကြည့်ရင် စိတ်မောစရာ စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းလှပါတယ်။
အမျိုးသားတွေကတော့ လူပျိုစစ်စစ် ဖြစ်ဖို့ မလိုတာ ဘာကြောင့်လဲ
7/29/2013 12:03:00 PM knowledge
မထားထား (ဓာတ်ပုံ - SAMANTHA MICHAELS / THE IRRAWADDY)
"အမျိုးသမီးတွေက ဘုရားစေတီတွေကို သွားခွင့်ရှိတယ်၊ ဒါပေမယ့် ဘုရား ပရ၀ုဏ်ထဲက တချို့နေရာတွေကို သွားခွင့် မရကြဘူး။
ဘုရား ပရ၀ုဏ်အတွင်း လူတွေထိုင်နိုင်တဲ့ အုတ်တံတိုင်း ဓာတ်ပုံကို မြင်ဖူးတယ်၊ အဲဒီမှာ ဆိုင်းဘုတ်နီကြီးနဲ့ ရေးထားတယ် ... အမျိုးသမီး မထိုင်ရ လို့။ ဒါပေမယ့် အုတ်တံတိုင်းပေါ်မှာ ခွေးတကောင် အိပ်နေတယ်။ ဒီတော့ အမျိုးသမီးတွေဟာ ခွေးလောက်မှ တန်ဖိုး မရှိတော့ဘူးလား"
ဒီအကြောင်း နဲ့ အမျိုးသမီးရေးရာတွေကို ပြောထားတာကတော့ ဧရာဝတီ ပင်မ စာမျက်နှာက အင်တာဗျူးတခုမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
ဖြေဆိုတဲ့သူက အခရာ အမျိုးသမီးအဖွဲ့က မထားထား ဖြစ်ပါတယ်။
အင်တာဗျူး ခေါင်းစဉ်က Why Don’t Men Need to Be Virgins? - အမျိုးသားတွေ လူပျိုရည်မပျက်ဖို့ မလိုတာ ဘာကြောင့်လဲ - ဖြစ်ပါတယ်။
မသိစိတ်ကရော သိစိတ်ကပါ ဟန့်တားတာတွေကို လေ့လာခြင်း၊ ဆွေးနွေးခြင်းတို့နဲ့ ပတ်သက်တဲ့ အကြောင်းအရာတွေ၊ ရန်ကုန်မြို့ ဘတ်စ်ကားပေါ်မှာ စော်ကား လက်သရမ်းမှုများ တိုက်ဖျက်ရေး စတာတွေကို ဒီအင်တာဗျူးမှာ ပွင့်ပွင့်လင်းလင်း ပြောထားတာ ဖတ်ရမှာပါ။
လင့်က http://www.irrawaddy.org/archives/40824 ဖြစ်ပါတယ်။
6/25/2014 04:28:00 PM Myanmar-news